ဒေါ်အောင်ဆန်းးစုကြည်နဲ့ NLD ကို အားပေးကြ ~ Nge Naing
ဒေါ်အောင်ဆန်းးစုကြည်နဲ့ NLD ကို အားပေးကြ
Monday, September 12, 2011 Nge Naing 62 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်အတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာတဲ့နည်းနဲ့ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါပြီ။ တချိန်တည်းမှာ အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် လူထုတိုက်ပွဲ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ၊ သံတမန်တိုက်ပွဲ စတဲ့ မိမိသန်ရာနည်းပေါင်းစုံနဲ့ တိုက်ပွဲဝင် နေသူအားလုံးကိုလည်း ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာ အာဏာရှင် စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ တိုက်ပွဲဝင်နေသူ အားလုံးကို ကျွန်မ အားပေးပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်လာတဲ့အထိမှ မစောင့်နိုင် ထိုသူတို့မျက်နှာကိုမှ မထောက် လူစင်စစ်နဲ့ ပုတ်သင်ညို ဖြစ်သွားရှာတဲ့ ပြည်တော်ပြန်နေသူ ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မနေ့တနေ့ကအထိ လေးစားလှချည်ရဲ့ဆိုပြီး အခုတော့ သုံးစားမရအောင် အထင်သေးနေကြသူတွေအတွက်တော့ ဒီလောက်တောင် ဘ၀ကူးမြန်ကြတဲ့အပေါ် တကယ်ပဲ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။
၈၈ နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအတွက် လှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတော်များများဟာ စစ်အုပ်စုလုပ်လိုက်တဲ့ Action တခုကို မူတည်ပြီး လှုပ်ရှားလာတာက များလို့ စစ်အုပ်စုက ဦးဆောင်ပြီး စစ်အုပ်စုခင်းတဲ့ လမ်းကိုလျှောက်လာခဲ့ရတယ်လို့ ပြောရင်မမှားပါဘူး။ သို့ပေမဲ့လည်း လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အခြေအနေကို ရောက်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အရှေ့က ဦးဆောင်လာခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခင်းတဲ့လမ်းကို စစ်အုပ်စုက လျှောက်နေရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေတာ တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေဟာ တိုက်ပွဲသာ ၀င်လာခဲ့ပေမဲ့ တိုက်ပွဲသဏ္ဍန်ကို မိမိအစီအစဉ်နဲ့ မိမိဘက်က စပြီးအကောင်အတည်ဖေါ်တာ တော်တော်လေး နည်းပြီး န၀တ၊ နအဖက တခုခုကို စလုပ်ပြီးမှပဲ အဲဒီအပေါ်မှာ တုံ့ပြန်တဲ့ တိုက်ပွဲငယ်တွေနဲ့ပဲ တောက်လျှောက် ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာ များပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြဿနာကို လူနာတယောက်မှာ ရှိတဲ့ ရောဂါတခုနဲ့ ဥပမာပေးရင် ရောဂါကို ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ ကုသမှု အဆင့်ကို မရောက်နိုင် မချည်းကပ်နိုင်ဘဲ ရောဂါလက္ခဏာတချို့ကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အဆင့်ကိုပဲ ကျွန်မတို့ လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖေါ်တဲ့နေရာမှာ ပြင်ပအင်အားစုတွေက နအဖ တခုခုလုပ်မှ အဲဒီအပေါ် ဆန္ဒစပြရတာ၊ စတိတ်မင့်စထုတ်တာ၊ UN မှာ lobby လုပ်ရင်လည်း နအဖ ဒီလို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်နေလို့ အရေးယူပေးဖို့၊ UN ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးဖို့ နအဖလုပ်တဲ့အပေါ်မှာပဲ သွားတောင်းဆိုရပါတယ်။ နယ်စပ်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်း ၉၃ နောက်ပိုင်း ရန်သူထိုးစစ်ဆင်မှ ခံစစ်အနေနဲ့ ပြန်ခံထားရတာကများပြီး မိမိဘက်က ကိုယ်တိုင် တိုက်ပွဲစဖေါ်တာ သိပ်နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာတော့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအပါအ၀င် တခြား ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှုတချို့ကို မိမိဘက်က ဦးဆောင်ခဲ့တာ တွေ့ရပေမဲ့လည်း တခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိ မရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရောဂါတခုလုံး ပျောက်ကင်းတာနဲ့ တူတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အဓိက ပြဿနာတခုလုံးကို ဖြေရှင်းဖို့အဆင့်ကို ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ လက်လှမ်းလို့ မမီသေးဘူး။ ဒါကြောင့် တခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကြည့်ရင် Actions တွေ အတော်များများက အာဏာရှင်လုပ်ပြီးသား လုပ်ရပ်အပေါ်မှာသာ မူတည်ပြီး နောက်က လိုက်လုပ်ရတာများလို့ အာဏာရှင်ခင်းတဲ့လမ်းကို လိုက်လျှောက်ရသလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လို့ ကျွန်မ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်တယ်။ အခုချိန်မှာတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာဖို့ကို တလျှောက်လုံးငြင်းလာခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်ဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖေါ်ဆောင်နေတဲ့လမ်းကို လိုက်လျှောက်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို စတင် တွေ့မြင်ရပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ကချင်အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရ စေ့စပ်ရေး ပျက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒီပြဿနာ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို အဆင်ပြေစေဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူကူညီလို့ရရင် ကူညီပါမယ်လို့ စစ်အုပ်စုနဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင် ပို့ပြီး စတင် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပေးစာကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက စစချင်းဘာမှ မတုန့်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ နယ်စပ်အင်အားစုတွေက RFA တနင်္ဂနွေစကားဝိုင်းကတင့် ကြိုဆိုကြောင်း လက်ခံကြောင်း တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အစိုးရက ဦးအောင်ကြည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အရင်တွေ့စေပြီး သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ စတင်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့မှတဆင့် နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ စီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ဖိတ်တယ်၊ ပြီးတော့ ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ဒီအဆင့်တွေ ဖြစ်လာအောင် အစိုးရက ဦးဆောင်လာခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို အစိုးရက သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ တုံ့ပြန်ပြီး ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အဆင့် ရောက်လာတာ ဖြစ်လို့ အရင်က ဆွေးနွေးဖို့ကို တ လျှောက်လုံး ငြင်းပယ်လာတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်လာလို့ ပါလာတာ ဖြစ်တယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြားခံအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးရင် ၄င်တို့အနေဖြင့် လက်ခံနိုင်ကြောင်း RFA က တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်းတခုမှာ အတိအလင်း ပြောထားပြီး ဖြစ်သလို အခု အာဏပိုင်အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း စပြီး စကားစပြောနေကြပြီဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖေါ်လာအောင် တွန်းအားပေးဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်။ အခုလိုအခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းးစုကြည် အသုံးချခံနေရတယ်ပြောသူ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မရိုးသားတော့ဘူး ပြောလာသူတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ်က ပယ်လိုက်ပြီလို့ ပြောကြသူနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ယူဆပိုင်ခွင့် ရှိလို့ ဘာမှ မပြောလိုပေမဲ့ မိသားစုကိုပစ်၊ အခြေအနေအစည်းစိမ်နဲ့ အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး မြန်မာပြည်အတွက် အနစ်နာခံကာ ပေးဆပ်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးအပေါ် ဒီမိုကရေစီ လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတချို့က ဒီလိုအထင်မြင်သေးကာ ပုတ်ခတ်စော်ကား တန်ဖိုးမထား ပြောဆိုကြတာကိုတော့ ကျွန်မ တကယ်ပဲ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။
အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက တကယ်ပဲ အသုံးချနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အသုံးချတာမဖြစ်စေဘဲ မှန်ကန်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုး ဖြစ်လာအောင် ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီလို ဖြစ်ရမည့်အစား ခေါင်းဆောင်စာရင်းက ပယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သူတွေ စေတနာကို စော်ကား ပြောဆိုမှုတွေကို တွေ့ရတော့ အခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး ဒီလောက်ပဲ အပြောင်းအလဲ မြန်တဲ့အပေါ် နားမလည်နိုင်အောင် အံ့သြမိပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက အဲဒီအထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်လာတဲ့နေ့က ကျွန်မနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့စဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသံလေးကြားချင်လှပြီ မျက်နှာလေးမြင်ချင်လှပြီ စကားသံလေး ကြားချင်လှပြီဆိုပြီး အဖြစ်သည်းနေတဲ့သူနဲ့ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ မှတ်ချက်သိပ်ရေးလေ့ မရှိပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်ပြီဆိုတာ ကိုဒီရေက ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်လာတင်ထားတော့ ၀မ်းသာအားရ ပြေးလာပြီး မှတ်ချက်လာရေးခဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သက်ရှိထဲမှာ အလေးစားဆုံးလို့ ပြောခဲ့ဖူးသူလည်းပါနေလို့ ပိုအံ့သြရတယ်။ အမှန်က အရင်က ဆွေးနွေးဖို့ အမြဲတမ်းငြင်းပယ်နေတဲ့ အစိုးရကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆွဲခေါ်လာနိုင်တာ ဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဖြစ်အောင် ကျွန်မတို့ သူ့ကို အရင်ကထက် ပိုပြီး ၀ိုင်းရံဖို့ မသင့်ဘူးလား။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက မရိုးသားဘဲ ရှိချင်ရှိမယ် အရာရာကို တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွှတ်ပြီး မြန်မာပြည်အတွက် ပေးဆပ်ထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် သူ့မှာ လူထုအတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလွဲရင် တခြားဘာမှ မရှိတော့ လူထုကို မရိုးမသားလုပ်စရာဆိုလုိ့ ရှိနိုင်ပါ့မလား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခုတွေ့ဆုံနေတာဟာ အရင်ကလို အကျယ်ချုပ်ကနေ နအဖခေါ်တွေ့လို့ ထွက်တွေ့ရတာမျိုးလည်း မဟုတ်၊ သူကိုယ်တိုင် Initiate လုပ်ပြီး အိတ်ဖွင့်ပေးစာနဲ့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း တွေ့တာ ဖြစ်လို့ တကယ်လို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက မလွဲသာမရှောင်သာဘဲ မရိုးသားနဲ့ တွေ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှ မရိုးမသား လုပ်လို့မရနိုင်အောင်ဒေါ်အာင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူတွေ အားလုံးက၀န်းရံပေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်ဖေါ်ဆောင်ဖြစ်အာင် ၀ိုင်းဝန်းတွန်းအားပေးသင့်တယ်လို့ပဲ ကျွန်မထင်တယ်။
ဦးသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို သူ့ရုံးခန်းထဲမှာ ချိတ်ထားတော့ တချို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖါးပြီးချိတ်တာလို့ ပြောကြတော့ ကျွန်မက ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ချိတ်ချိတ် အကြာကြီး လစ်လျူရှုထားခံရပြီး အခုလို ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို အစိုးရရုံးခန်းမှာ ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့တာ အာစီယံနေရာအတွက်ပဲ တွေ့တွေ့ ဖိအားကြောင့်ပဲ တွေ့တွေ့၊ တကယ်ငြိမ်းချမ်းစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ပဲ တွေ့တွေ့ ဘာကြောင့်ပဲတွေ့တွေ့ စကားပြောတယ်ဆိုကတည်းက သူကကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့လမ်းကို စလျှောက်တာပဲ ဖြစ်လို့ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ငြိမ်းချမ်းစေချင်သူမှန်သမျှဟာ ဒီအပေါ်မှာ အပြစ်တင်ရှုပ်ချနေမည့်အစား တကယ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ အခြေအနေ ဖန်လာအောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဖို့ တကယ်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို အားပေးကြဆိုတဲ့စကားကို ထပ်ခါထပ်ခါ ရေးထားတဲ့ အဘဦးရဲခေါင်ရဲ့ ငါတို့တသက် ယုံကြည်ချက် နိုးဆော်လွှာ ပို့စ်ကိုလည်း ထပ်ဆင့်ညွန်းလိုက်ပါတယ်။
(ဘလော့ဂ်တခုရဲ့ မှတ်ချက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့စာသားကို နောက်တော့ ဒီစာသားနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေက အများကြီး ရှိတာကို သတိထားမိလို့ မအားလို့ ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာလည်း ကြာပြီဆိုတော့ အဲဒီမှာ ဖျက်လိုက်ပြီး အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ကာ ဘလော့ဂ်မှာ သီးသန့်ပို့စ်တခုအဖြစ် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။)
Posted in: ခံစားမှု,ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်,နိုးဆော်လွှာ
ဒေါ်စု မညံ့ပါ (၁) says:
September 12, 2011 at 10:09 AM Reply
ဒီတလော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ တို့ “နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်း” ထဲ ရောက်နေကြတာ အားလုံးအသိပါ။ ဒီလို “နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်း” ထဲ ရောက်လာဖို့အကြောင်းက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအရေး … စတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေ တွေ့နေရာကနေ လျော့ပါးလွတ်မြောက်အောင် “ဟန်ဆောင်စကားဝိုင်း” ဖွဲ့တယ် ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်လောက်ပါတယ်။
ဒီအာဏာရှင်တွေဟာ နိုင်ငံမှာ အကျပ်အတည်းတွေ့တိုင်း ဒီလိုလုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာလည်း အားလုံးသိပြီး လောက်ပါပြီ။ ပြီးရင် အရင်အတိုင်း လူ့အခွင့်အရေးကို ဆက်လက်ချိုးဖောက်တာပါပဲ။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ မေလ - ၃၀ ရက် ည ဒီပဲယင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးတင်ဦး တို့အဖွဲ့ကို လုပ်ကြံတာဖြစ်တယ်။ ဒေါ်စု၊ ဦးတင်ဦး တို့ အသက်မသေခဲ့ပေမယ့် အကျယ်ချုပ်ချထားခြင်း ခံလိုက်ရပါတယ်။
အကျယ်ချုပ်လွတ်ရက်စေ့ခါနီးမှ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ယက်ထော နဲ့ အပေးအယူလုပ်ပြီး၊ ဒေါ်စု ကို အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်စု ခမျာ မိအေး(၃)ခါနာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ လုပ်ကြံတာကိုလည်း ခံရသေး၊ အကျယ်ချုပ်လည်းခံလိုက်ရတဲ့အပြင် အမှုဖန်တီးပြီး သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။
နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဒီလိုကောက်ကျစ်ယုတ်မာတယ် ဆိုတာလည်း လူတိုင်းအသိပါ။ ဒါကိုလည်း ခံရသူ ဒေါ်စု က သူများထက် ပိုသိနိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်စု မညံ့ပါ (၂) says:
September 12, 2011 at 10:10 AM Reply
ခုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် တို့ ၂၅-၇-၂၀၁၁ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး “နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်” လို့ဆိုပြီး ကမ္ဘာကို လှည့်စားဦးမယ် ဆိုတာလည်း သိပြီးသားပါ။
နောက်တစ်ဖန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နေပြည်တော်ကို ဖိတ်မန္တက ပြုပြီး ၁၉-၈-၂၀၁၁ မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြန်တယ်။ ဒါလည်း နိုင်ငံတကာကို “နိုင်ငံတော်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့လည်း ဆွေးနွေးတယ်” ဖြစ်အောင် ဟန်ပြလုပ်ပြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ အရာရှိ ၂ ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ချဉ်းကပ်တာဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ် စိတ်ကောင်းစေတနာရှိလို့ မဟုတ်ပါ။ အထက်ဖေါ်ပြပါ အကျပ်အတည်းတွေ လျော့ပါးလွတ်မြောက်အောင်နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မှာ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ချင်လို့ ဒီလို ဟန်ပြဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း အားလုံး သိပြီးသားပါ။ အဓိက ကတော့ သူတို့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အကွက်ဆင်တယ် ဆိုတာလည်း သိကြပါတယ်။
ဒေါ်စု မညံ့ပါ (၃) says:
September 12, 2011 at 10:12 AM Reply
ခုလတ်တလော ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ တက်ကြွသူတွေထဲက တချို့က “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရဘက် ပါသွားပြီလား” ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ဝင်နေတာကို သိရပါတယ်။ ဒီလို စိုးရိမ်လို့ တွေးတာလည်း မှားတယ်လို့ အပြစ်မပြောသင့်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုက ဒီလောက်မညံ့ပါဘူး။ စိတ်ချပါ။ ဒေါ်စုဟာ ဘယ်တော့မှ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို ဒီမိုကရေစီ မရမချင်း ကျောခိုင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရဲရဲကြီး အာမခံရဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့-
၁။ ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင် တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေ၊ ခံစားနေရတာ သိရှိတွေ့မြင် နေသလို ဘာ့ကြောင့်၊ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ် ဆိုတာလည်း သိပြီးသားပါ။
၂။ ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင်လည်း စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့် အသက်ဘေးက သီသီလေး လွတ်မြောက်လာခဲ့ရတာ (၂)ကြိမ် ထက် မနည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။
၃။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် လုပ်နေရက်နဲ့ ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းခံရတာလည်း သူ့အသက် ထက်ဝက်နီးနီး ရှိနေခဲ့ပြီ ဆိုတာ သူအသိပါ။
၄။ ကြံ့ဖွတ်အာဏာရှင် အပါအဝင် နဝတ၊ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ အာဏာတည်မြဲရေး၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝရေး အတွက် မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာ ကို အကြိမ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ လိမ်ညာလှည့်စား ဖြားယောင်း လက်တလုံးခြား လုပ်ခဲ့တာ၊ ပြည်သူတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေလည်း ဒေါ်စု သိပြီးသားပါ။
ဒါတွေကိုသိပြီး ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ နောက်ထပ် ဒီလိုမျိုး ထပ်မခံရအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် စဉ်းစားထား ပြီးပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒေါ်စု မညံ့ပါ (၄) says:
September 12, 2011 at 10:13 AM Reply
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ -
(၁) မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး စစ်ဖိနပ်အောက်က လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာ ၂၃ နှစ် ရှိခဲ့ပါပြီ။
(၂) အဲဒီအတွက် ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင်လည်း အပင်ပန်း၊ အနစ်နာ၊ အဆင်းရဲခံပြီး လုပ်လာတာ ၂၃ နှစ် ရှိပါပြီ။
(၃) ပြည်သူလူထုအတွက် မိသားစုကိုစွန့်ခဲ့၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုစွန့်ခဲ့၊ နောက်ဆုံး အသက်ကိုပါ စွန့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်း ၂၃ နှစ် ရှိခဲ့ပြီးမှ ဒီလိုလူယုတ်မာတွေ ကြိုးဆွဲရာ “က” မယ်လို့ မယုံကြည်ပါ။
ဒေါ်စု ရဲ့ ခိုင်မာသော ခံယူချက်၊ မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ရင့်ကျက်သော အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိရှိတွေ့မြင်နေတာကြောင့် ဒေါ်စုဟာ တချို့ထင်သလို အာဏာရှင်တွေဘက် ယိမ်းယိုင်မသွားဘူးဆိုတာ လုံးဝ သံသယကင်းပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် သူ့ဘဝကို ၂၃ နှစ် တိုင်တိုင် မြှုပ်ခဲ့ပြီး ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးမှ ဒီလူယုတ်မာ အာဏာရှင်တွေကို ဒူးထောက်မှာ မဟုတ်သလို ဘယ်တော့မှလည်း ပြည်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဝေးကွာအောင်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်။
(ဧရာဝတီဘလော့မှ ရွှေပြည်စိုး၏ ဆောင်းပါးကို ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
"ပုတ်သင်ညို ဂေါ်ဇီလာ" အဖြစ် မမြင်တွေ့လိုပါ says:
September 12, 2011 at 10:23 AM Reply
ရာသီအလိုက် အရောင်ပြောင်းတတ်ပြီး ပြောသမျှ ခေါင်းညိတ်တတ်တဲ့
"ပုတ်သင်ညို ဂေါ်ဇီလာ" အဖြစ် မမြင်တွေ့လိုပါ
သီးလေးသီးဟာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအခြေအနေနဲ့ ပြည်ပက နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အခြေအနေကို အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်...။ ခံယူချက် ပြောင်းမပြောင်း ဆိုတာကတော့ အချိန်က အဖြေပေးပါလိမ့်မယ်...။ "ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက် အခြေအနေကို နားလည်ပေးပါ" ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးကိုတော့ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ...။ လက်ရှိ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အားလုံးက မျက်စိဖွင့်၊ နားဖွင့် စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ "ပြည်သူ့ဘက်သား ဂေါ်ဇီလာ" အဖြစ်ပဲ မြင်ချင်ပါတယ်...။ ရာသီအလိုက် အရောင်ပြောင်းတတ်ပြီး ပြောသမျှ ခေါင်းညိတ်တတ်တဲ့ ဖွတ်နဲ့ အမျိုးတူ ပုတ်သင်ညိုဘဝ အဖြစ်တော့ မမြင်တွေ့လိုပါ..။
"သီးလေးသီးအဖွဲ့ကြီး" မြန်မာပြည် ပြန်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါ says:
September 12, 2011 at 10:31 AM Reply
သီးလေးသီးထဲက ပန်းသီး၊ ကြယ်သီးနဲ့ စကားလက်ဆုံ၊ သူတို့လည်း ပြန်ကြမှာလား
မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁
ကြယ်သီး ။ ။ ကျနော်တို့တော့ လောလောဆယ်ပြန်ဘို့ အစီစဉ် မရှိသေးပါဘူး။
ပန်းသီး ။ ။ ပထမအချက်က ကျနော်တို့အစ်ကိုဆရာ ကိုဇာဂနာနဲ့တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွတ်မြောက်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့သူတို့တွေ လွတ်မြောက်တာကို လိုချင်၊ တွေ့ချင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်က တိကျတဲ့ ဥပဒေတွေလဲ မထုတ်ပြန်သေးဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် ပြန်ဘို့ကိစ္စကို မစဉ်းစားသေးတာပါ။ ပြန်သင့်တဲ့ တနေ့ ကျရင်တော့ ပြန်မှာပေါ့ဗျာ။
မေး ။ ။ တကယ်လို့ အတူ တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ပြန်မယ် ဆိုရင်ကော ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။
မေး ။ ။ ကိုဇာဂနာကိုကော ဘာပြောချင်ပါသေးလဲ။
(မိုးမခဘလော့မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
September 12, 2011 at 10:38 AM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြတာကို ကျနော်ကလည်း မကန့်ကွက်ပါဘူး။ ကြိုဆိုပါတယ်။ အဲသည်လို တွေ့ဆုံပွဲကို ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ဆောင်းပါးထဲမှာ တလုံးတပါဒတောင် မထည့်ခဲ့ပါဘူး။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အဖွဲ့ချုပ်က အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့တုန်းက အင်တိုက်အားတိုက် ထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာ ကျနော်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ထောက်ခံဆဲပါ။
ကျနော်ဝေဖန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဒေါ်စုက ပြည်သူလူထုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိတဲ့အတွက်ရယ်၊ အာရ်အက်ဖ်အေက မေးခွန်းတွေ (တခုတည်းမဟုတ်) အတော်များများမှာ ဝေလည်ကြောင်ပတ် ဖြေရုံမက တခါတလေ အငေါ်တူးတယ်လို့ ယူဆလို့ရတဲ့ အဖြေမျိုးတွေကိုပါ တွေ့နေရတဲ့အတွက်ရယ်၊ ရှေ့သွားမယ်လမ်းစဉ်တွေကို အခုအချိန်အထိ ဘာမှ တိတိပပ မပြောဘဲ….. “ဖြစ်မလာတော့မှ သူခေါင်းခံမယ်” ဆိုပြီး တကိုယ်တော်လူစွမ်းကောင်း ဝါဒမျိုး ပြောနေတာကို လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် ဝေဖန်ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့နဲ့တုန်းကလည်း ဘာတွေပြောခဲ့၊ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ အခုအချိန်အထိ ရေရေရာရာ ထုတ်ပြောခဲ့တာမျိုးမရှိဘူး။ ကျနော်တို့က ဘယ်အချိန်အထိ စောင့်ရမှာလဲ။ သူဘာလုပ်နေမှန်းမသိဘဲ ရမ်းထောက်ခံရမှာ သဘာဝကျသလားဆိုတာ မငယ်နိုင်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ရမ်းထောက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံမှုပဲဖြစ်မယ်။
ဦးနေဝင်းတို့၊ ဦးစောတို့လည်း တချိန်ကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတွေပဲ။ နောက်တော့မှ အမှားတွေ လုပ်သွားတဲ့အတွက် သမိုင်းဆိုးသွားရတာ။
ဒေါ်စုကို ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမရောက်စေချင်တဲ့အတွက် အစကတည်းက ပြည်သူလူထုကို ခင်းကျင်းပြသပြီး ထောက်ခံမှုကို ရယူစေချင်တာပါ။ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ မှန်သည်ဖြစ်စေ အများသဘောထားနဲ့ပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို သွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့မညီဘဲ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို တဦးတယောက် သဘောဆန္ဒနဲ့ လုပ်နေတာကို မထောက်ခံတဲ့သဘောပါ။
အစိုးရ အမည်ခံထားတဲ့ လူလိမ်တွေရဲ့ စကားကို မယုံသင့်ပါ says:
နှစ် ၅ဝ လုံးလုံး လိမ်လာတဲ့ အစိုးရအမည်ခံ စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင် တွေဟာ ကလိမ်ကကျစ်ကောင်တွေ၊ သူခိုးတွေ၊ လူသတ်ကောင်တွေ၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေ ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ သိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ အမည်ခံထားတဲ့ လူလိမ်တွေရဲ့ စကားကို မယုံသင့်တာကို သက်သေပြနေတဲ့ သတင်း နောက်တပုဒ်ကတော့ အောက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ပြည်တွင်းမှ စာနယ်ဇင်းသမားတဦးကမူ “သမ္မတက ခေါ်တာလည်း အမှန်တကယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေတွေကလည်း အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲသေးတာလည်း အမှန်ပဲ။ နောက်ဆက်တွဲ ပြည်ပရောက်တွေ ပြန်လာဖို့ ဥပဒေတွေလည်း မထုတ်တော့ဘူး” ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
KNU ခေါင်းဆောင် မန်းငြိမ်းမောင်ကို မြန်မာအစိုးရ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း says:
September 12, 2011 at 11:08 AM Reply
KNU ခေါင်းဆောင် မန်းငြိမ်းမောင်ကို မြန်မာအစိုးရ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
KNU ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို တရုတ် အာဏာပိုင်များက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်လိုက်သဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသည်။
မန်းငြိမ်းမောင်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လေကြောင်းဖြင့် ရောက်လာရာ ထိုင်းက ပြည်ဝင်ခွင့် မပြုဘဲ တရုတ်ပြည်သို့ ပြန်ပို့လိုက်သည်။ တရုတ်အာဏာပိုင်များက သူ့ကို ကူမင်းလေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ယခင်လက ရန်ကုန်သွားမည့် လေယာဉ်တစီးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
မန်းငြိမ်းမောင်၏ သားကြီးက “အဖေ့ သတင်းကြားရတာ သိပ်မကောင်းဘူး၊ အဖေ မြန်မာထောက်လှမ်းရေးလက်ထဲ ရောက်သွားပြီလို့ ကြားရတယ်” ဟု ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပြောသည်။
မန်းငြိမ်းမောင်သည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဇွန်လက မန်းငြိမ်းမောင်သည် အစိုးရတပ်နှင့် KIA တိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ သွားလေ့လာခဲ့သေးသည်။
မန်းငြိမ်းမောင်သည် သူ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အကြီးအကျယ် နှိပ်စက်ခံရဖွယ်ရှိသည်။ မန်းငြိမ်းမောင်သည် ယခင်ကလည်း မြန်မာပြည်အကျဉ်းစခန်း၊ ထောင်တို့တွင် နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံရဖူးသည်။
September 12, 2011 at 11:24 AM Reply
ကိုပေါရေ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိရင်လည်း တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုပေါတယောက်တည်းကို ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသိပေးဖို့ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ကိုပေါပို့စ်အောက်မှာ အတော်များများက မှတ်ချက်ပေးထားတာကို ကျွန်မလက်ခံလို့ ဘာမှထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ ကိုပေါ ရေးထားတဲ့ပို့စ်နဲ့ အခုဒီမှတ်ချက်ထဲမှာတော့ ဒီလောက်အထိ မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုပေါပို့စ်ထဲက မှတ်ချက်တွေကို တုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသုံးစားလို့မရတဲ့အဆင့်ရောက်အောင် ရေးထားတာကိုတွေ့တဲ့အပြင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် အချိန်ပေးပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မှတ်ချက်ပေးတဲ့အပေါ် အရွဲ့တိုက်ပြီး တုန့်ပြန်ထားတာကိုတွေ့တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သက်ရှိထဲမှာ အလေးစားဆုံးဆိုတဲ့ အများအကျိုးလိုလားသူ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ သူတယောက်က ဘာမဟုတ်တာနဲ့ အဲလိုအထိ ဖြစ်သွားတာကို အံ့သြခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း၊ နှမြောခြင်း ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မ အချိန်ပေးပြီး တလေးတစားနဲ့ ဆွေးနွေးထားတဲ့မှတ်ချက်ကို ကိုပေါ Comment အောက်က ပြန်ဖျက်ပြီး မလိုတာဖြုတ်၊ လိုထာဖြည့်စွက်ပြီး ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုပေါ ဘလော့ဂ်မှာ မှတ်ချက်ရေးမိလို့ ဒီပို့စ်ကိုတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရော ဒီမှာ ဖြည့်စွက်ရေးထားတာကို လာဖတ်တဲ့အတွက်ပါ ကိုပေါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နို့မဟုတ်ရင် ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်အသစ်တင်ဖြစ်သေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ မှတ်ချက်အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်မှာ အရင်ရေးထားတဲ့ အရွဲ့တိုက်ထားတဲ့ တပိုဒ်ဖြုတ်ထားတာသတိထားမိလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်အထိ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ် သွားရောက်ကပြခဲ့တဲ့ ငိုကျော်ဆန်းရဲ့ ရိုက်ချက် (၁) says:
တရုတ်ပြည်အထိ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ် သွားရောက်ကပြခဲ့တဲ့ ငိုကျော်ဆန်းရဲ့ ရိုက်ချက် (၁)
တရုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ Sinohydro Bureau 11 Co., Ltd. မှ "fierce battle Myitkyina" ရုပ်သံဖိုင်ပါ လင့်ခ်အား ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း...
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့က ကျွန်တော့်ဘလော့(ဂ်)မှာ တရုတ် ရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ Sinohydro Bureau 11 Co., Ltd. "fierce battle Myitkyina"ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကို အများသိအောင် ထုတ်ဖော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်...။ အဆိုပါ Sinohydro Bureau 11 Co., Ltd. ရဲ့ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ရုပ်သံဖိုင်ကို ကူးယူဖော်ပြခဲ့သလို ကုမ္ပဏီလိပ်စာနဲ့ တကွ ထိုစဉ်က ဤကဲ့သို့ အများသိစေရန် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်...။
(ကုမ္ပဏီလိပ်စာ http://www.cwb11.com/index.html ဒီမှာလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။...။ http://www.cwb11.com/modelinfo/detail_3_104_40.html
ပြည်တွင်းမှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင်... http://www.mediafire.com/?az0bto356d5db5e )
တရုတ်ပြည်အထိ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ် သွားရောက်ကပြခဲ့တဲ့ ငိုကျော်ဆန်းရဲ့ ရိုက်ချက် တရုတ်ပြည်အထိ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ် သွားရောက်ကပြခဲ့တဲ့ ငိုကျော်ဆန်းရဲ့ ရိုက်ချက် (၂) says:
ဒီမှတ်တမ်းတွေဟာ လက်လှမ်းမှီ ရိုက်ကူးတင်ပြဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ အတွက် စီမံကိန်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ မြန်မာကုမ္ပဏီတွေမှတပါး.. အဆိုပါဒေသမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်သူတွေ ရိုက်ကူး မှတ်တမ်းတင်ဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်...။
ယနေ့မှာတော့ အဆိုပါ ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Sinohydro Bureau 11 Co., Ltd. ရဲ့ ယခင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ http://www.cwb11.com/modelinfo/detail_3_104_40.html ရုပ်သံသတင်း နေရာမှာ မြန်မာပြည်မှ စာပေစိစစ်ရေးတွေ ကြောင့်လား ဒါမှမဟုတ် မီဒီယာကို မသမာနည်းနဲ့ ကိုက်ပြီး ဆင်ကြံကြံနေတဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ငိုချုပ်၊ ဆင်ကျော်ဆန်းကြောင့်ပဲလား မသိ ဗီဒီယို ဖိုင်ပါတဲ့ လင့်ခ် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ဆုံးနေပြီး ဖျက်သိမ်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်..။
အဆိုပါ တရုတ်ရေအားလျှပ်စစ် ကုမ္ပဏီဟာလည်း မြန်မာဝက်ဆိုဒ်တွေနဲ့ သတင်းဋ္ဌာနတွေမှာ အဆိုပါ သတင်းရုပ်သံတွေ ဖော်ပြပါရှိနေတယ်ဆိုတာ မြန်မာဘက်က အသိမပေးရင် တရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်က သိနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး...။ ပြီးခဲတဲ့ လေး၊ ငါးရက်ခန့်က အဆိုပါ တရုတ်ကုမ္ပဏီဝက်ဆိုဒ်မှ အဆိုပါ မြစ်ဆုံသတင်းရုပ်သံအား သွားရောက်ကြည့်ရှုသူ ၂ထောင်ကျော် ရှိနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်...။
ယနေ့သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ "မီဒီယာကို လွတ်လပ်ခွင့် မပေးနိုင်သေးပါဘူး" ဆိုတဲ့ ငိုချုပ်ဆင်ကျော်ဆန်းနဲ့အဖွဲ့မှ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ် ကို တရုတ်ပြည်အထိ သွားရောက် ကပြပြီး တရုတ်ကုမ္ပဏီက ရုပ်သံဖိုင်ကိုပါ ဆင်ဆာပိတ်ခဲ့ပါတယ်..။
တရုတ်ပြည်အထိ ခြေလှမ်းကျယ်တဲ့ ငိုချုပ်ဆင်ကျော်ဆန်းရဲ့ ဆင်ဆာအဖွဲ့ (ခ) ဆင်ကြံအဖွဲ့ ကံဇာတာ ဂြိုလ်စီးပြီး အင်ကြင်းပန်းတွေပဲ ခေါင်းပေါ်ကျမလား၊ ခါချဉ်ကောင်တွေပဲ ခေါင်းပေါ်ကျမလား၊ သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်တွေလို ဘယ်တော့များ ဆင်နင်းပြီး မြင်းအကန် ခံရကိန်း ကျရောက်လာတော့မလဲ ဆိုတာကတော့ မကြာမှီ မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် မပေးနိုင်ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း ပြော says:
September 12, 2011 at 12:07 PM Reply
08 September 2011 15:03
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းသည် ယမန်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းသည့် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ရရှိရေး အဆိုကို ဖြေကြားရာတွင် ဘုရားအလောင်း ဆန္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ်ထုပ်ကို နာရီဝက်ကျော် ပြောဆို၍ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် မပေးနိုင်ကြောင်း သွယ်ဝိုက် ငြင်းဆိုသွားသည်။
“ဆန္ဒန်ဆင်မင်းက သူရဲ့ မိဖုရား စူဠသုဘဒ္ဒါပေါ်ကို အင်ကြင်းပန်းတွေ ကျစေချင်လို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ခါချဉ်ကောင်တွေ ကျပြီး ခါချဉ်ကိုက်လို့ စူဠသုဘဒ္ဒါက ဆန္ဒန်ဆင်မင်းအပေါ်ကို ရန်ငြိုးဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ အင်ကြင်းပန်းကို ပေးချင်ပေမယ့် ခါချဉ်တွေကျလာရင် စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့သဘော ပြောသွားတယ်” ဟု လွှတ်တော် တက်ရောက်နေသည့် ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။
ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းက မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပေးချင်သော်လည်း ဝေဒနာဖြစ်မည်စိုးသောကြောင့် မပေးနိုင်သေးကြောင်းကို နာရီဝက်ကျော်ကြာအောင် သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ၀န်ကြီးဦးကျော်ဆန်းက စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကို အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ စီးဆင်းနေသော ရေစီးကြောင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြလိုက်ပြီး အရှိန်နှင့် စီးဆင်းနေသော မြစ်ရေချောင်းရေသည် မြစ်ချောင်းများ အတွင်း စီးဆင်းသွားပါက အကျိုးများမည် ဖြစ်သော်လည်း မြစ်ဘောင်ချောင်းဘောင်အတွင်း ရှိမနေဘဲ စည်းကမ်းမဲ့စွာ ပျံ့နှံ့စီးဆင်းသွားမည်ဆိုပါက လူသားတို့အတွက် အပြစ်ဆိုးကျိုးက ပိုမိုများပြားစေမည်ဟု ပြောသည်။
မောင်သန့် ။ says:
September 12, 2011 at 12:14 PM Reply
တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်စည်းသတ် ဆွေးနွေးမှု နဲ့ စည်းမသတ်ထားတဲ့ ဆွေးနွေးမှု စသဖြင့်ပေါ့။
ဘယ်လိုပုံစံ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးချက် အပြည့် အစုံ ကိုသော်၎င်း၊ တ၀က်တပျက် ကိုသော်၎င်း ဖော်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သေး တဲ့ အနေအထားတခုပါ။ အင်မတန် သိမ်မွေ့ တဲ့ အခြေအနေတခုပါ။
မသိသင့်၊မသိစေချင်သေးတဲ့ အလှည့် အပြောင်းတခုမို့လို့ အသိမပေးသေးတာ ကို နားလည်ပေးတာဟာ နိုင်ငံရေး စည်းစောင့်မှုတခုပါ။
ဗီယက်နမ် ကိစ္စ ပဲရစ် ဆွေးနွေးပွဲ၊ မော်-နစ်ကစင်ဆွေးနွေးပွဲ ပဏာမ ကြိုးပမ်းချက်တွေ မျိုး ကို ဒီမိုကရေစီ အထွန်းကားဆုံး အမေရီကန် လို နိုင်ငံမှာတောင်မှ အဆုံးသတ်ခါနီးမှ ပြည်သူတွေ သိရတာပါ။
ကိုယ့်စည်း ကိုယ်စောင့်ကြပီး အဖွဲ့ ချုပ်နဲ့ဒေါ်စု ကို ညီညီညွတ်ညွတ် ၀န်းရံပေးကြရင် ပိုအကျိုး ထင်ပါလိမ့်မယ် လို့ ယူကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
မျက်ရည်ခံထိုးတဲ့ ဖျံကျရေး ဝံကြီး "ဂွတို ကျော်ဆန်း" says:
မျက်ရည်ခံထိုးတဲ့ ဖျံကျရေး ဝံကြီး "ဂွတို ကျော်ဆန်း"
"မီဒီယာကို မျက်ရည်နဲ့ ပြောင်းတိုက်ပြီလား"
သတင်းဆောင်းပါးကို ဖတ်ရန် မျက်ရည်ခံထိုးတဲ့ ဖျံကျရေး ဝံကြီး "ဂွတို ကျော်ဆန်း" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။
ဖျံကျရေး ဝံကြီး "ဂွတို ကျော်ဆန်း" ဟာ ဘီလူးက၊ မျောက်က များကို ကပြလေ့ရှိသူ အဖြစ် လူသိများနေရာမှ ငိုချင်းချတဲ့ ဇာတ်ကို ပြောင်းလဲ ကပြလာသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဇာတ်မနာနာအောင် မုသားစကား၊ ခံစားမှုအတု၊ မိကျောင်းမျက်ရည် နဲ့ မျက်ရည်ခံထိုးရင်း ငိုချင်းချတာက ဇာတ်မနာဘဲ ဟာသ ဖြစ်နေတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ဖြစ်ရတော့တာပေါ့။
လူသတ်ကောင်၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင်၊ သူခိုး ဗိုလ်ချုပ်တွေက ပြည်သူ့ ငွေတွေကို ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ထောင်ချီပြီး ခိုးယူထားပြီး ဘီလျံနာ ဖြစ်နေတာပါ။
ဒါကို သူတော်ကောင်း ကြက်သူခိုး "ဂွတို ကျော်ဆန်း" က "ဗိုလ်ချုပ်တွေက တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံနေပါတယ်" ဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား မုသားစကား ပြောလိုက်တာကတော့ အဆိုးဆုံး ပြက်လုံး ဖြစ်သွားတော့တာပဲ။
"ဂွတို ကျော်ဆန်း" ဟာ အလွမ်းဇာတ်မှာ ငိုချင်းချပြီး မျက်ရည်ခံထိုးရင်း အရှက်ကွဲသွားပေမယ့် ဇွဲမလျှော့သေးဘဲ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ဇာတ်ကို ပြောင်းလဲ ကပြရာမှာလည်း " တော်ပါတော့၊ ဆင်းပါတော့" လို့ ရွှေမန်းက တားယူရတဲ့အထိ ပြောစမှတ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
"ဂွတို ကျော်ဆန်း" သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ "ဥလုပွဲ" သီချင်း (video) says:
September 12, 2011 at 12:18 PM Reply
တေးသံရှင် "အရိုး" ရဲ့ "ဥလုပွဲ" သီချင်းကို
"ဂွတို ကျော်ဆန်း" ရဲ့ မျောက်က အပါအဝင် တေးသရုပ်ဖော် သရုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ တွဲဘက် ရှုစားရန်
"A War for an Egg"
တေးသံရှင် - အရိုး
သရုပ်ဆောင် - ဂွတို ကျော်ဆန်း
ဟိုဘက်ခြံက အကောင် ပုကွကွ
အတင်း ဝင်ကောက်တဲ့ ဟိုဘက်က ဂျပု
နှုတ်ခမ်းတွေ ကွဲလို့ ခေါင်းတွေဖု
လူပါးဝလွန်းတဲ့ ဂျပု မျက်ခွက်
I omitted the last part because you didn't mentioned about it in your post. If I included it here in your post, it will be irrelevant to your post. So, omitting it here doesn't mean I changed my position. My position is still the same as what I replied to Alvin Aung.
Sorry for using English as I don't have the Burmese font on the pc I am using now.
သီးလေးသီးမှာ သီး ၂ သီးက ရန်ကုန်ပြန်သွားပြီး သီး ၂ သီးက ပြည်ပမှာ ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုတော့ နအဖဘက်က ခွဲနိုင်တယ်၊ ဖြိုနိုင်တယ် လို့ပြောရမယ်။ ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်သမိုင်းနဲ့ကိုယ်မို့အမှားအမှန်ကတော့ ကိုယ်နဲ့ သာ ဆိုင်ပါတယ်။
Messenger News Journal (မက်ဆင်ဂျာသတင်းဂျာနယ်) Facebook မှာ "လေဆိပ်တွင် တစုံတစ်ရာ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း မရှိခဲ့" လို့ရေးထားပါတယ်။
သီးလေးသီးမှာ သီး ၂ သီးက ရန်ကုန်ပြန်သွားတာ အရပ်သားအရေခွံ ခြုံထားတဲ့ စစ်အုပ်စုအကြိုက်မို့ကြိုဆိုမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တုန်းကလည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီတွေကို စစ်အုပ်စုဘက်က သူတို့ ခင်းထားတဲ့ လမ်းလျှောက်သူများ အဖြစ် အထိုက်အလျောက် ရောရောယောင်ယောင် ကြိတ်ပြီး လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီလို သီး ၂ သီးက ရန်ကုန်ပြန်ဝင်သွားလို့"လေဆိပ်တွင် တစုံတစ်ရာ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း မရှိခဲ့" တာလောက် ကွက်ကွက်ကလေးကို ကြည့်ပြီး"မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ပြောင်းလဲသွားပြီ၊ စစ်အုပ်စုဘက်က သဘောထားပြောင်းသွားပြီ" လို့ တော့ တွက်လို့ မရပါဘူး။
ယမ်းငွေ့ တွေ ဝေနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေး တွေက အရပ်သားအရေခွံ ခြုံထားတဲ့ စစ်အုပ်စု လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် ကိစ္စ၊ ဆုံးဖြတ်ရမည့်ကိစ္စတွေပါ။
September 12, 2011 at 1:10 PM Reply
ကိုပေါ ဒီပို့စ်ထဲမှာ ကျွန်မ ဘယ်သူ့နာမည်ကိုမှ တကူးတက မထည့်ထားဘူး။ ကျွန်မ ရည်ညွန်းတာလည်း ကိုပေါတယောက်တည်း မကလို့ ကိုပေါဆီမှာ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖြုတ်ပြီး ပို့စ်အဖြစ် ဖြည့်စွက်တင်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကိုပေါက ကိုပေါပို့စ်မှာ ပေးပြီးသားမို့ ကျွန်မ သိပြီးသားမှတ်ချက်ကို ပြန်လာထည့်တော့ အရင်းမရှိအဖျားမရှိ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ပြန်ရည်ညွန်းပြီး အကြောင်းပြန်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ မသိလို့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုပေါရဲ့ သဘောထားတွေကို ထပ်မပြောလည်း ကျွန်မ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ကိုပေါ တခေါက် ပြန်လာဖတ်တယ်ဆိုတော့ အပေါ်မှာ မောင်သန့်ရေးထားတာကိုလည်း ဖတ်သွားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဘယ်သူမဆို သူများလုပ်တာကို ကြည့်ပြီး အားမရဖြစ်တတ်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ၀င်လုပ်ကြည့်မှပဲ အခက်အခဲဆိုတာ သိနိုင်တာ သဘာဝပါပဲ ကိုပေါကို ကျွန်မ ဒီလိုပဲ နားလည်ပါတယ်။
အသုံးချခံရမည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မမှု says:
September 12, 2011 at 1:12 PM Reply
Friday, 09 September 2011 16:39
မြန်မာအစိုးရ၏ အသုံးချမှုကိုခံနေရခြင်း မရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်ဟု RFA ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ကြာသပတေးနေ့က ဖော်ပြထားသည်။ မကြာမီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံကြပြီးနောက် သိသာသည့် ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုများ ဖြစ်မလာသေးသဖြင့် ထိုသို့ သုံးသပ်နေကြချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တုံ့ပြန်ချက် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“အသုံးချခံနေရတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး၊ ပူးတွဲပြီး လုပ်ဆောင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖိအားပေးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့်အစိုးရ၏ အသုံးချခံ ဖြစ်သွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ခြင်း မရှိဟု ဆိုသည်။ “တကယ် အသုံးချခံရတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးချခံရတယ်ဆိုရင် မနှစ်မြို့စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး၊ ယုံကြည်ချက်အတွက် ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် သစ္စာဖောက်မည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း မိတ္ထီလာခရိုင် NLD စည်းရုံးရေး ကော်မတီဝင် ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ပြောသည်။ “လမ်းကြောင်းမှန် ပေါ်လာအောင် ကြံဆပြီး လုပ်နေတဲ့ဟာကို ကျမတို့က ထောက်ခံပြီး ပံ့ပိုးပေးသွားရမယ်” ဟု ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ လ အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့နှင့် တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးမှုအကြောင်းအရာ အသေးစိတ် နှင့် သဘောတူညီချက်များကို နှစ်ဘက်လုံးက မထုတ်ပြန်သေးပေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ တွေ့ဆုံမှု နှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရမီဒီယာများက ထုတ်ပြန်ရာတွင် မတူ ကွဲလွဲချက်များကို ရှောင်ရှားပြီး တူညီချက်များကို တိုင်းပြည် အကျိုးစီးပွားအတွက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည် ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း တွေ့ဆုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်အားရမှုရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရက ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ ခေါ် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး ရလိုသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဖိအား လျော့နည်းစေရန် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံပြခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသူတချို့က ပြောဆိုနေကြသည်။
September 12, 2011 at 1:14 PM Reply
အမရေ လူတွေရဲ့ အပြောင်းအလဲမြန်တတ်တာ ကို ကြည့် ပြီး အနဲငယ် စိတ် ကသိကအောက် ဖြစ် ရပေမဲ့ အမ ရဲ့ စာကို ဖတ် ပြီး အင်မတန် အားတက်ရ ပါတယ် ကျတော် တို့ ယုံကြည် ချက် ကို စုပ် ကိုင် ပြီး အမေ့ကို ဝိုင်းရံ ကြပါစို့
"အစိုးရနှင့် ညှိသင့်တာတွေ ညှိခဲ့ရသည်" ဟု သီးလေးသီးအဖွဲ့ဝင် စိန်သီးက ပြောသည် says:
September 12, 2011 at 1:53 PM Reply
"အစိုးရနှင့် ညှိသင့်တာတွေ ညှိခဲ့ရသည်" ဟု သီးလေးသီးအဖွဲ့ဝင် စိန်သီးက ပြောသည်
စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁ (YPI)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၎င်းမိန့်ခွန်းဖြင့် ပြည်ပရောက်များ ပြန်လာခွင့်ပြုမည်ဟု ကမ်းလှမ်းပြီးနောက် သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ဂေါ်ဇီလာ၊ ချောစုမျိုး၊ စိန်သီးနှင့် ဇီးသီးတို့ ၄ ဦး ပြည်တော်ပြန်လာရာ အစိုးရနှင့် ညှိသင့်သည့်အချက်များ ညှိခဲ့ရသည်ဟု သီးလေးသီးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် စိန်သီးက ပြောသည်။
သီးလေးသီး အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ဂေါ်ဇီလာ၊ ချောစုမျိုး၊ စိန်သီးနှင့် ဇီးသီးတို့ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ယမန်နေ့ညနေ ၆ နာရီခန့်က ပြန်လည် ရောက်ရှိလာစဉ် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်၌ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
Yangon Press International (Facebook)
September 13, 2011 at 7:25 AM Reply
ထောက်ခံမူ ရှိမရှိက ခင်ဗျာ အပိုင်းပါ။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ အချိန်အတိုင်တာအလိုက်ပြောသင့်တာတွေ ထုတ်ဖေါ်ပြောနေတာ ..အာလုံးသိနိုင်တယ်။ ခင်ဗျာက ဘယ်လောက်ထိ သိချင်နေတာလဲ။ ပိုသိချင်ရင် ခင်ဗျာ စကားကို ပဲ ယူပြောလိုက်ပါတယ်..ကိုယ်တိုင်သွားမေးလိုက်ပါ။
အခုမှ စပြီ ၂ ဘက် နားလည်မူ တည်ဆောက်နေကြတာ..လက်ရှိအခြေအနေက နေ မကျအောင် ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးဖို့ အကြံပြုပါတယ်ဗျာ..
ပါတီ ဆက်လက်ရှင်သန်ရေး ..စသဖြင့်
နည်းလမ်းများစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးမဲံ့ 
ဒီအပေါ်မှာပဲ ရှိနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
မောင်သန့်နဲ့ Anonymous (September 13, 2011 7:25 AM)
ကိုပေါက "Alvin Aung ကို ပြန်ထားတာ အရွဲ့တိုက်တာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အတည်ပြောနေတာပါ။ မငယ်နိုင်တို့ရဲ့ လက်ရှိအတွေးအခေါ်မျိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်အထိ ကျနော့်မှာလည်း ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခု အဲဒီအတွေးအခေါ်တွေ မှားယွင်းတယ်လို့ ကျနော့်ဘာသာ ယူဆတဲ့အတွက် မကျင့်သုံးတော့တာပါ။" ဆိုပြီး ကျွန်မကို ပြောထားတယ်။ တကယ်လည်းပဲ သူ့ပို့စ်က " ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD နဲ့ ဂငယ်ကွေ့" ကျွန်မပို့စ်က "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို အားပေးကြ" ဆိုတော့ အနှစ်သာရချင်းက လုံးဝကွာသွားပါပြီ။ ကိုပေါက အမှန်တရားကို သိသွားပြီမို့ အတွေးအခေါ်မှားနေသူလို့ သူယူဆထားသူ တယောက် ဘလော့ဂ်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လာဖတ်မယ် မထင်ဘူး။ ဒါကြောင့် မောင်သန့်နဲ့ Anonymous ဒီမှာပေးထားတဲ့ ကိုပေါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်တွေကို သူ့ဘလော့ဂ်က သူ့ပို့စ် (http://kopaw07.blogspot.com/2011/09/nld.html) မှာလည်း သွားပေးသင့်ပြီး အဲဒါမှ သူ့ဆီပေးတဲ့ Message သူ့ဆီရောက်ဖို့ သေချာမှာ ဖြစ်တယ်။
ကိုပေါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ သူက သူ့ဘလော့ဂ်က Alvin ကို အကြောင်းပြန်တဲ့မှတ်ချက်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဆွေးနွေးတာတွေကို Public ကို မထုတ်ပြန်သေးတာနဲ့ပဲ သူမလေးစားတော့တာကို သူယုတ်မာလိုလို ဘာလိုလို နဲ့ဥပမာပေးပြီး ပြောထားတယ်။ ပြီးတော့ အများအတွက် သူဘာမှလုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် ရှိတာမဟုတ်ဘူး နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ သူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက် ပတ်သက်ရတယ်လို့လည်း Alvin မေးခွန်းကို ဖြေရာမှာ ပြောထားသေးတယ်ဆိုတော့ သူ့သဘောထားက ရှင်းနေပါပြီ။ ကျွန်မက ဒါကို ရွဲ့ပြောတယ်ထင်တာကိုလည်း သူက ရွဲ့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး အတည်ပြောတာလို့ ကျွန်မကို ပြန်ပြောတာ သူ့ဘလော့ဂ်မှာတခါ အခုဒီမှာ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်မှာတခါ Alvin ကို သူပြောထားတာ အတည်ပါဆိုပြီး ထပ်လာပြောထားသေးတယ် ဆိုတော့ ဒါက သူ့ရဲ့ သဘောထားအမှန်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းက သူ့သဘောသူဆောင်ကြတာချည်းပါပဲ ဒီအပေါ်မှာ ဘာမှ ကသိကအောက် မဖြစ်ပါနဲ့။
September 16, 2011 at 12:55 PM Reply
၈၈ အရေးအခင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နားမလည်ပါးမလည်၊ အသက် အရွယ်ငယ်ငယ် အတွေ့ အကြုံ မလုံမလောက်နဲ့ မလည်ရှုပ် ၀င်လုပ်တာ သူရော တိုင်းပြည်ပါ ပျက်သုံဉ်းဘို့ ဖြစ်လာတာဘဲ။
တကယ်လို့ နိုင်ငံရေးထဲသို့ဒေါ်စုမ၀င် ရောက်ခဲ့ရင် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်လျှင် လူထုက ရွေးစရာမရှိလို့ ဦးအောင်ကြီး ကိုသာ မဲပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့  စာရင် ရှစ်လေးလုံး ဖြစ်အောင် တာစူတဲ့ အထဲမှာ ဦးအောင်ကြီးက အများကြီးစောတယ်။
ဦးအောင်ကြီး လုပ်သမျှ လွှတ်ထားပြီး ဦးနေ၀င်းက လှည့်ကွက်နဲ့ နာမည်ကောင်းယူ အသုံးချ- ပြီးတော့ သူ ရှောင်ထွက်ဖို့လုပ်တယ် ဆိုတာ အဲဒီတုန်း ကတည်းက နိုင်ငံရေး နား လည်တဲ့ လူတိုင်း တွက်မိကြတယ်။
ဦးအောင်ကြီးတက်လျှင် ဦးနေ၀င်းသည် ဦးအောင်ကြီးကို တိုင်းပြည်စီးပွါးရေး ဦးစီးခိုင်းမယ်။
ဦးအောင်ကြီးအာဏာရလာလျှင်လည်း တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီ၆၀%ရလာမယ်။
အဓိကအချက်ကတော့ ဦးနေ၀င်းက အရာရာကို နောက်ကွယ်မှ ကြိုးမကိုင်တော့ဘဲ ဦးအောင်ကြီးကို စီးပွါးရေး လွတ်လပ်ခွင့် ပေးကာ သူ့အသက်ရွယ်အရ အနားယူချင်တာ သူ၏ အသက်လုံခြုံရေး ကိုသာ အဓိကထား မှာဖြစ်တယ်။
ဒါကို ဗကပ-က လဲ သိတယ်။
ဗကပ-က ဦးအောင်ကြီးကို မလိုချင်ဘူး။ တချိန်က သူတို့ ရန်သူဟောင်း။
ဒေါ်စု နိုင်ငံရေးထဲ ရောက်လာတယ် ဆိုတာကလဲ မိခင်-ဒေါ်ခင်ကြည် ပြုစုဖို့ ရောက်လာရင်းကနေ အဆွယ်ကောင်းလို့ ဗကပ- တွေ အပင့်ကောင်းလို့ ဆိုတာ ပဌမဆုံး တရားပွဲမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦးထွန်းဝေနဲ့ တွဲထွက်လာတာ ကြည့်ရင် အထင်အရှားကြီး မြင်နိုင်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံကြ၊ အင်အယ်လ်ဒီကို ၀န်းရံကြ ဆိုပြီး ဗကပ-တို့ တစခန်း ထလာ တော့တယ်။
ကိုထွန်းဝေ ကတရုတ်ဗမာကပြာွးပါ။ ကိုထွန်းဝေ က အဖေတရုတ်၊ အမေ ဗမာပါ။ အဖေက စစ်မှုထမ်းချေဆိုတော့က ဗမာပြည်ကနေ တရုတ်ပြည်ကို လွှတ်ပြီး စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာပါ။ သူ့ကိုမွေးတုန်းက ရှန်ဟိုင်းမှာ.စစ်မှုထမ်း တာကတော့ အဖေက အရွယ် ရောက်ရင် စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခိုင်းလို့တဲ့ မော်စီတုန်း တို့ရဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော် မှာ စစ်မှုထမ်းတာပါ။ဇင်မင်းပို” ခေါ် တရုတ်သတင်းစာရဲ့ သတင်းထောက်အဖြစ်နဲ့ မန္တလေးမှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဦးထွန်းဝေက “တရုတ်နီ” ကလာတာဆိုတော့ လက်ဝဲ၀ါဒတွေရဲ့ ဗီဇပါလာပုံရပါတယ်။ ဦးထွန်းဝေက နိုင်ငံရေးကို မျက်ခြေမပြတ်သူပါ။ တရုတ်ဘာသာနဲ့ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေနဲ့ သမိုင်းစာအုပ်တွေ ကိုလဲ ဖတ်ပါတယ်။ သူ့မွေးနေ့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က တဦးတည်းသွား ကန်တော့ခဲ့ပါ တယ်။ဦးထွန်းဝေက ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနဲ့အတူ တရုတ်ပြည်ကမ္ဘာ့ငြိမ်း ချမ်းရေးညီလာခံကို စကားပြန်အဖြစ်နဲ့လဲ လိုက်ပါဖူး ပါတယ် (၁၉၅၂ ခု)(From Moemaka copy)
တကယ်တမ်းမှာ ရှစ်လေးလုံးကနေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင်၊ ဘယ်သူက အောင်အောင်မြင်မြင် ဦးဆောင်နိုင်မှာလဲ၊
ရှစ်လေးလုံးလဲ မအောင၊် ဦးနေ၀င်းအစိုးရကတော့ ပြုတ်ကျနဲ့၊ ဗကပတွေ အာဏာရသွားနိုင်တာကို၊ အမေရိကန်က ကြောက်တာပေါ့။
ရှစ်လေးလုံး စတာနဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ ဒေါ်စုနား သွားကပ် ကုန်ပြီဆိုတာ သူတို့လဲ သိတာပဲ။
ဒါကြောင့် အဲဒီတုန်းက အမေရိကန်က မနှစ်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အောက်လွှတ်တော်အမတ် စတီဗင် ဆိုလာ့ဇ်ကို လွှတ်ပြီး ဒေါက်တာမောင်မောင် အပါအ၀င် ဦးနုတို့ ဦးအောင်ကြီးတို့ ဒေါ်စုတို့နဲ့ လာစကားပြောပြီး တောက်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့။
စတီဗင်ဆို လာ့ဇ်က အဲဒီတုန်းက အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ရဲ့ အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးရာ ဆပ်ကော် မတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ။ သူ့အလုပ် သူလာလုပ်တာပေါ့။
သူက အမေရိကန်လွှတ်တော်က ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ခိုင်းခဲ့လို့ မြောက် ကိုးရီးယား ကင်အီဆွန်း၊ အီရတ် ဆဒမ်ဟူစိန်တို့နဲ့ပါ သွားစကားပြောဘူးတဲ့ လူ။
မြန်မာပြည်က ရှစ်လေးလုံးအချိန် အ ခြေအနေမှန်ကို သဘောပေါက် လာခဲ့ တာပေါ့။
အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကို ပြန်ပြီး အစီရင်ခံတာက၊ ဘယ်သူမှ မြန်မာပြည်မှာ ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှုကနေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာအောင် တကယ်တမ်း ခေါင်းမဆောင် နိုင်ဘူး။
ဦးနု တို့ ဒေါ်စုတို့ အာဏာရရင် သိပ်မကြာဘူး၊ ကွန်မြူနစ်တွေပဲ အာဏာလက်ပြောင်း ယူသွားလိမ့်မယ်။ ဒေါ်စုကတော့ အတွေ့အကြုံ ဘာမှမရှိလို့။ ဦးနုကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ညံ့လို့။
ဦးအောင်ကြီး အာဏာရရင်တော့ ကွန်မြူနစ် မတက်နိုင် ဘူး။
ဒါပေမယ့် ဦးအောင်ကြီးကို မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မထောက်ခံဘူး။
ဒါကြောင့် အမေရိကန်က ဘာမှ သွားမ ရှုပ်နဲ့၊ ငြိမ်ငြိမ်လေး ပွဲကြည့်ပရိဿတ်သာလုပ်၊ စစ်အေးကာလမှာ မြန်မာစစ်တပ်က အမေရိကန်ဘက်က ရှိနေဖို့ လို တယ်လို့ စတီဗင်ဆိုလာ့ဇ်က အစီရင်ခံခဲ့တာ။
September 17, 2011 at 6:17 AM Reply
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုစ့်ကို ဆရာလွဏ်းဆွေဆီမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်
Nge Naing to thatoe.thuzara.
show details Sep 16 (1 day ago)
မေးလ်လိပ်စာအတိအကျနဲ့ လာရေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်က ကျမကို အဲလိုတခါမှ မပြောဖူးပါ။ သူ့ဆောင်းပါးတွေကို ကြိုက်ရင်ကြိုက်သလို မကြိုက်ရင် မကြိုက်သလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ဆွေးနွေးပြီး မှတ်ချက်ပေးဖူးပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ အမြင်မတူတာကို အဆင့်အတန်းရှိရှီ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပေါက်ကရရေးတာကိုတော့ လက်မခံဘူး။ အဲဒီတော့ ရှင်ပေးတဲ့မှတ်ချက်ထဲမှာ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်မပြောဘဲနဲ့ ပြောတယ်လို့ ပါနေတဲ့စာသားတွေကြောင့် ဒီမှတ်ချက်ကို နောက်တနာရီကြာရင် ဖျက်မှာမို့ အကြောင်းကြားပါတယ်။ ထည့်ပေးစေချင်ရင် အဲဒါကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်ရေးပါ ဖျက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုပေါနဲ့ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် နှစ်ယောက်စလုံး ကျမနဲ့ ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး မိမိနဲ့ အမြင်မတူတာကို လွတ်လပ်စွာ အဆင့်အတန်းရှိရှိ ဆွေးနွေးခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ သူ့ပို့စ်တွေကို ကျွန်မသဘောမတူရင် သဘောမတူသလို ဟိုတုန်းကလည်း အမြဲဆွေးနွေးနေကျပဲ။ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းတဲ့ပုံစံလာမလုပ်ပါနဲ့။ ရှင်ရန်တိုက်ပေးလို့ ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာ နားလည်ပါ။ ယောက်ျားကြီးလုပ်ပြီး ရန်ထိုးရန်တိုက်မလုပ်ပါနဲ့ ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
(((((thatoe.thuzaraung@googlemail.com has leftanew comment on your post "ဒေါ်အောင်ဆန်းးစုကြည်နဲ့ NLD ကို အားပေးကြ":
ဝဋ်နာကံနာ လို.သာ သဘောထားလိုက်ပါ
ကျွန်တော်တို.၊ ကိုပေါ တို.က ဟိုးအရင်ကတည်းက ဘလော.ရေး၊ ဘလော.ဖတ်လာကြတာ
မငယ်နိုင်တို.ဆိုတာ ကျွန်တော်တို. ရေးပြီး ၃ နှစ်လောက်ကြာမှ ဘလော. ရေးတာဆိုတော. ခုချိန်ထိ ဘလော.ကို ဘဝ ထင်နေတုန်းဖြစ်မှာပေါ.))))
September 20, 2011 at 8:33 AM Reply
ပြည်ပက လုံခြုံတဲ့ အခန်းတစ်ခုထဲကနေ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး လူထုတော်လှန်ရေး၊ လူထုတိုက်ပွဲ၊ ပြည်သူတွေရဲ့အဆုံးအဖြတ် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ လှုိင်းလုံးစသည်ဖြင့် လေလုံးနိုင်ငံရေးလုပ်လိုက်၊ အပြင်ထွက် ဘီယာသောက်လိုက်၊ ဟမ်ဘာဂါလေး စားလိုက်၊ လျှောက်လည်လိုက်၊ ဒီလိုမျိုး လှုံဆော်မှုများကြောင့်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ ပြည်ပက လေနိုင်ငံရေးသမားတွေအယောက် တစ်သိန်း လောက်နဲ့ ပြည်တွင်းက အညတရ လူမသိသူမသိ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် ဘယ်သူ ပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ အလွယ်ဆုံး အနီးကပ်ဆုံး ဥပမာပေး ခိုင်းနှိုင်းရရင် ဘေးမှထိုင်ပြီး အားမရဖြစ် ဝေဖန်နေကြသူ တစ်သိန်းသည် ပြည်တွင်းက ကိုဖိုးဖြူလောက်တောင်အဖြစ်မရှိကြပါ။ နောက်ပြီး ပြည်တွင်းပြန်ပြီး လှုံဆော်လျှင် အဖမ်းခံရမည်ကိုလည်း ကြောက်နေကြပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင် ပြည်တွင်းပြန် ၊ စည်းရုံးလှုံဆော်ကြစေလိုပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မလွယ်မှန်းသိလို့ လွယ်တဲ့ လေနိုင်ငံရေးပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း လမ်းစဉ်ပါတဲ့ စံမီတဲ့ဆောင်းပါးများကို ရေးသားပြစမ်းပါလို့။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို ဗိုလ်ချုပ်ပြောဖူးတဲ့ စကားလေး ရှိပါတယ်။ ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့်နေရင် အိပ်ရေးပျက်တယ်ဆိုတာ။
နောက်ပြီး ဒေါ်စုက တကယ်တော့ အသက်သိပ်ကြီးသွားပြီ။ ဒီလောက် အသက်ကြီးလှတဲ့ အဖွားကြီးကို လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဘာတွေလုပ်ဖို့ ပြောနေတဲ့ အရွယ်ကောင်း နိုင်ငံရေး သုခမိန်များကို ကြည့်ပြီး အားတက်မိမလိုတောင် ဖြစ်ရပါတယ်။သူအလုပ်လုပ်နိုင်ရင် အလွန်ဆုံး ၄ - ၅ နှစ်ပေါ့။ ဒေါ်စုမရှိတော့တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအကြောင်း စိတ်ကူးပြီး ဆောင်းပါးလေးများ ရေးသားကြစမ်းပါ။ တပိုဒ်ထက် ပိုမထွက်နိုင်ဘူး။ အားလုံး ပြီးသွားပြီ။
ကျွန်တော်ဒီစာကို နာမည်အရင်းနဲ့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုဝတုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးရင် ကျွန်တော်လည်း နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးမှာပါ။ ကိုဝတုတ်က မြန်မာပြည်ကို ပြန်ချင်မှ ပြန်မှာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်က ပြန်ရဦးမှာ။ ဒီလို ကြောက်လို့ မြန်မာပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်လို့ ၀န်ခံပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ဟာ ကိုဝတုတ်နဲ့ ပုလင်းတူဗူးဆို့ ကိုပေါရဲ့ ဘလောက်ပရိသတ်တဦးပါ။ သူ့ကို ကျောင်းတူဘာသာတူတဲ့ သံယောဇဉ်အရရော၊ သူ့ရဲ့ သတ်တိကြောင့်ရော၊ သူ့ဘလောက်ကို ဖတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါအားပေးထောက်ခံတဲ့ စလုံးက ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလည်း သောက်သောက်လဲရှုံး၊ ပြည်တွင်းကိုလည်း အားမရ၊ ပြန်လည်း မလုပ်နိုင်၊ စိတ်ညစ်ပြီး ကုပ်နေရာကနေ လေနိုင်ငံရေးထလုပ်ပြီး ချက်ချင်းစင်မြင့်ပေါ်ရောက်လာအောင် ဆောင်းပါးတွေရေး၊ နာမည်တော့ ကြီးတာပေါ့ဗျာ။ ငါ ကိုပေါကွ ၊ ဒါငါ့လမ်းစဉ် ၊ ဒီလိုတိုက်ယူရင် ရမယ်ဆိုပြီး လမ်းစဉ်ချပြစမ်းပါ။ ကိုယ်တိုင်သွားလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် ဆိုတာပဲ ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ဆောင်းပါးတွေဖတ်ပြီး ဟိုကြော်ငြာတစ်ခုကို သတိရမိတော့တယ်။ .. ဟိုလိုလုပ်ပါလား...ဒီလိုလုပ်ပါလား .....ငါလည်း မလုပ်တတ်ဘူး..............။
September 20, 2011 at 8:35 AM Reply
ဆောင်းပါးရှင်သည် ဖေ့ဘုတ်မှာ ကိုဝတုတ်အမည်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေသောသူဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကိုဝတုတ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကော်မင့်များကို ဖတ်ပြီး သဘောကျသည်များလည်းရှိ၊ မကျသည်များလည်းရှိပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ ဆောင်းပါးအာဘော်များကို ရေးသားကြသူများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းသည့်အချက်ကို တင်ပြလိုပါတယ်။ ယခုတလော ဒေါ်စု၏ လုပ်ရပ်များကို အားမရဖြစ်ပြီး ဝေဖန်နေသောသူများ အားလုံးလိုလိုသည် ပြည်ပတွင် ရှိနေကြသောသူများသာဖြစ်ကြတယ်။ အိမ်ပြန်ဖို့ မစဉ်းစားသောသူများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထောင်တန်းမကျလိုပဲ လွယ်ကူသည့် စာ နိုင်ငံရေး ၊ လေနိုင်ငံရေးများသာ လုပ်လိုကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအမြင်များလည်း အထိုက်အလျောက်ရှိကြပြီး ကိုယ့်အမြင်များကိုလည်း စာဖြင့် ရေးပြီး ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ပညာများလည်း အထိုက်အလျောက်တတ်ကြပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် သူများလုပ်တာကို ဘေးမှထိုင်ပြီး ဝေဖန်သောအလုပ်သည် အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်ဆိုတာကိုလည်း သိကြပါလိမ့်မယ်။ ယခုကဲ့သို့ အလွယ်ဆုံးဝေဖန်စာများကို ရေးသာကြသလို ဒေါ်စု ခင်ဗျား ဒါတွေလုပ်နေမယ့်အစား ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်မျိုးတွေကိုလည်း ရေးသားချပြကြစေချင်ပါတယ်။ ဒေါ်စုလုပ်သည် မလုပ်သည် အသာထား။ အော် ဒီလူက ဒီလို လမ်းစဉ်ရှိပါလား ၊ ဒီလူ့ လမ်းစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ် စသဖြင့် ချပြနိုင်ရင်ဖြင့် စာဖတ်သူများ အသိအမြင် ကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ပြီး ရာဇ၀င်ဘီး တစ်ပတ်လည်လာသည်ဟုပင် ထင်မိတယ်။ ဂျပန်ပြေးအပြီး အင်္ဂလိပ်ပြန်အ၀င်မှာ ဗိုလ်ချုပ်က ဖဆပလကိုခေါင်းဆောင်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ကြိုးပမ်။ အစက အတိုက်အခံအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်ထံ ရာထူးမယူမူဖြင့် လှုပ်ရှား။ နောက်တော့ ဘုရင်ခံအစိုးရအဖွဲ့မှာ ရာထူးယူလိုက်ရော။ ဝေဖန်သံများ ညံခနဲတက်လာတယ်။ ထိုအချိန်က ရုရှကွန်မြူနစ်နောက်လိုက် တစောက်ကန်း ကွန်မြူနစ်များ၊ ပတ်မကြီးထိုးဖောက်လိုသည့် သခင်ထွန်းအုပ်၊ သခင်ဗစိန်လို လူများ၊ အသံအဆူညံဆုံးဖြင့် ဝေဖန်ကြတယ်။ တစောက်ကန်း မြန်မာကွန်မြူနစ်များက လက်နက်ကိုင်ပြီးတိုက်မှ လွတ်လပ်ရေးစစ်မှန်သည်ဟု နိုင်ငံရပ်ခြား အသံများကို နားထောင်ပြီး ယုံကြည်နေကြတယ်။ သခင်ဗစိန်တို့က မနာလိုလို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က လူထု အသက်သာဆုံးဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို အရယူဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဘယ်သူတွေမှားပြီး ဘယ်သူတွေမှန်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်တွေ ခေတ်တွေ ၊ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ဘက်မတူတာတွေ၊ ပြည်သူတွေ ပါဝင်မှု၊ အားပေးထောက်ခံမှု......စသည့် များပြားလှတဲ့ ကွာခြားချက်တွေက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စုကို စည်းခြားထားပါတယ်။
September 20, 2011 at 8:55 AM Reply
"ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ..." (ဝတုတ် ရဲ့ ပေးစာ) says:
"ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ..." (ဝတုတ် ရဲ့ ပေးစာ)
ကို ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
"ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ..." (ဝတုတ် ရဲ့ ပေးစာ) ဟာ ဘလော့ဂါ ကိုပေါ ရဲ့ အမြင်နဲ့ တထပ်ထဲ ကျတယ် ဆိုတဲ့ သူရိန်ကျော်ဇော (ဝတုတ်) ရဲ့ ပေးစာဖြစ်ပါတယ်။
ခုတလော မီဒီယာတွေမှာ ဒေါ်စုကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် မဟုတ်သည့်တိုင် အရိပ်အမြွက်အနေနဲ့ ဝေဖန်လာကြတာကို ဖတ်ရှုရပါတယ်။ အန်တီစု ရရှိခဲ့တဲ့ နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုက အရည်ပျော်မသွားနိုင်သလို ရှစ်လေးလုံး၊ ဒီပဲယင်း၊ ရွှေဝါရောင်၊ NLD ပါတီကို လျစ်လျူရှု၍ မရကောင်းမှန်းလည်း အန်တီစု ကိုယ်တိုင် သိနှင့်နေမှာပါ။
တချို့ကတော့ မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖေါ်တောင် မရတော့ပဲ နှစ်လရှည်ကြာ ပြည်သူကို ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို နိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုက လွတ်ကင်းအောင်၊ အာစီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာအောင် "ဒေါ်စုက အသုံးချခံခဲ့ပြီ" လို့ ထင်မြင် ယူဆနေကြပါတယ်။
"ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ..." ကို ရေးတဲ့ ၀တုတ် ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော မြေး သူရိန်ကျော်ဇော (ex-BBC) ဖြစ်ပါတယ်။
"ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ..." ကို လူထု ဦးလှ၊ လူထု ဒေါ်အမာ မြေး ဘိုဘိုလန်းစင်၊ ဘလော့ဂါ ကိုပေါ အပါအဝင် လူတချို့က ထောက်ခံနေပါတယ်။
ကိုပေါက သူရိန်ကျော်ဇော (၀တုတ်) နဲ့ အမြင် တထပ်တည်းပါပဲ။
(( ကိုပေါ said...
ကိုဝတုတ်ရေ... တလုံးမကျန် ထောက်ခံတယ်ဗျို့။ ကိုဝတုတ်ရေးထားတာနဲ့ ကျနော့်အမြင်နဲ့ တထပ်တည်းပဲ။ ))
အဲဒီလူတွေ (၀တုတ်၊ ဘိုဘိုလန်းစင်၊ ဘလော့ဂါ ကိုပေါ၊ ...) အစိုးရိမ်လွန်ပြီး အထင်လွဲနေသလို အန်တီစုဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အသုံးချတာကို ခံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အန်တီစုက စစ်အုပ်စုကို ပြန်ပြီး အသုံးချမလို့ အကွက်ဆင်နေတာပါ။ ဖောက်ထွက်ဖို့ အကွက်ထွင်နေတာပါ။ ပြည်သူတွေ မလိုလားတဲ့ အနေအထားကို အန်တီစုက ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တုတ်ရဲ့ပေးစာ ( "ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ..." ) ကို ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။
September 20, 2011 at 9:34 AM Reply
ဝတုတ် ရဲ့ ပေးစာ says:
September 20, 2011 at 9:37 AM Reply
ဝတုတ် ရဲ့ ပေးစာ ကို ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
September 20, 2011 at 9:40 AM Reply
ဝတုတ် ရေးတဲ့ "ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ" says:
September 20, 2011 at 9:46 AM Reply
ဝတုတ် ရေးတဲ့ "ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ" ကို ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
September 20, 2011 at 9:48 AM Reply
September 20, 2011 at 9:52 AM Reply
(ဝတုတ် ရေးတဲ့ "ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ" ကို ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
September 20, 2011 at 9:54 AM Reply
September 20, 2011 at 9:56 AM Reply
တချို့ကတော့ မြစ်ဆုံရေကာတာ အကြောင်းတောင် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖေါ် မရတော့ပဲ နှစ်လရှည်ကြာ ပြည်သူကို ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို နိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုက လွတ်ကင်းအောင်၊ အာစီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာအောင် "ဒေါ်စုက အသုံးချခံခဲ့ပြီ" လို့ ထင်မြင် ယူဆနေကြပါတယ်။
September 20, 2011 at 9:59 AM Reply
အဲဒီလူတွေ (သူရိန်ကျော်ဇော (၀တုတ်)၊ ဘိုဘိုလန်းစင်၊ ဘလော့ဂါ ကိုပေါ၊ ...) အစိုးရိမ်လွန်ပြီး အထင်လွဲနေသလို အန်တီစုဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အသုံးချတာကို ခံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အန်တီစုက စစ်အုပ်စုကို ပြန်ပြီး အသုံးချမလို့ အကွက်ဆင်နေတာပါ။ ဖောက်ထွက်ဖို့ အကွက်ထွင်နေတာပါ။ ပြည်သူတွေ မလိုလားတဲ့ အနေအထားကို အန်တီစုက ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
September 20, 2011 at 10:25 AM Reply
အန်တီစုကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်နေသူတွေ (၀တုတ်၊ ဘိုဘိုလန်းစင်၊ ဘလော့ဂါ ကိုပေါ၊ ...) အစိုးရိမ်လွန်ပြီး အထင်လွဲနေသလို အန်တီစုဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အသုံးချတာကို ခံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အန်တီစုက စစ်အုပ်စုကို ပြန်ပြီး အသုံးချမလို့ အကွက်ဆင်နေတာပါ။ ဖောက်ထွက်ဖို့ အကွက်ထွင်နေတာပါ။
ပြည်သူတွေ မလိုလားတဲ့ အနေအထားကို အန်တီစုက ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တုတ်ကြီး (ခေတ္တ-သာဝတိံသာ) ၏ ဒေါ်စုကို ဝေဖန်သော ဆောင်းပါး says:
September 26, 2011 at 12:38 PM Reply
တုတ်ကြီး (ခေတ္တ-သာဝတိံသာ) ၏
“ဥုံ ဖွ ဟယ် ... ယုံကြကွယ်” ဆောင်းပါး ...
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်သော ဆောင်းပါး)
September 26, 2011 at 12:45 PM Reply
တုတ်ကြီးရေ ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ထောက်ခံတယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ ကုိုဝတုတ်ကို ထောက်ခံမိလို့ ထက်ထက်မုိုးဦး ပရိသတ်က ကျုပ်ကုိုပါ ဆဲလည်း ဆဲပါစေတော့။
၀တုတ် တို့ ၊ တုတ်ကြီး(တာဝတိံသာ) တို့မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ထောင်ကျခံပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်ရဲမလား၊ ကိုယ့်လူတို့says:
September 26, 2011 at 12:52 PM Reply
၀တုတ် တို့ ၊ တုတ်ကြီး(တာဝတိံသာ) တို့မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ထောင်ကျခံပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်ရဲမလား၊ ကိုယ့်လူတို့ 
ဒီတခေါက်ကတော့ တုတ်တွေ မြူးပုံရတယ်
၀တုတ် တို့.. တုတ်ကြီး(တာဝတိံသာ)တို့ ..
နောက်ဘာ တွေ ထပ်ပြီး တုတ်လာမလဲ စောင့်
တုတ်ကြီးက စာတွေ အများကြီးရေးထားတယ်ဗျာ။
ဒေါ်စုက ဘာလုပ်ရမှာလည်း ကိုယ့်လူတို့ ရဲ့ ။
ခင်ဗျားတို့ စာထဲမှာ မြင်နေရတော့
အကောင်းဆုံးလို့ သူထင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ 
ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ကျနော့်အနေနဲ့ တော့
ဆောင်းပါးရှင် ကိုဝတုတ်တို့ ၊တုတ်ကြီး(တာဝတိ့ သာ)တို့ ဟာ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေး
ကိုဝတုတ်တို့ ကိုတုတ်ကြီးတို့ 
ဝြေဖန်စာထဲမှာကိုဝတုတ်တို့ တုတ်ကြီးတို့ ရဲ့ 
ကိုဝတုတ်တို့ လိုတုတ်ကြီးတို့ လို
တက်ကြွသူတွေ ၊နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားနားလည်သူတွေကို အမိမြန်မာပြည်က
ထောင်ထဲမှာမင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ ရောက်နေချိန်
တုတ်ကြီး တာဝတိံသာကဆင်းလာပြီဟေ့
နေခဲ့ကြတော့ အဝေးကမြင်ရတဲ့ အမြင်ရယ်
ကိုဝတုတ်တို့ ၊တုတ်ကြီးတို့ လိုလူမျိုး
နည်းတဲ့အားမဟုတ်ပါလား ဆရာတို့ ရယ်။
ဘယ်နှယ့်လဲ ။ပြန်ရဲမလား ကိုယ့်လူတို့ ။
ဘူးလို့ သာနာနာရေး။ အစိုးရသတင်းစာမှာ ပင်တိုင်ကလောင်
ရှင်များအဖြစ်နဲ့ ခြေတော်တင်မြှောက်စားခံ ရမှာမြင်ယောင်မိပါသေး...)
လှုပ်ရှားဖို့ ပြောလို့စိတ်ထဲမှာတွန့် သွားမယ်။ အဖြေက မပြန်ဘူး ဆိုရင်တော့
လင်စွန့် သားစွန့် ပြီး မြန်မာပြည်အရေးကို
နှစ်ရှည်လများ ဒုက္ခခံပြီး ရုန်းကန်နေတဲ့ 
အဖွားကြီးတယောက်ကို မသုံးသင့်ဘူး ဆိုတာ
ကျနော်တို့ တွေဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ 
လောက်တော့ ကိုယ့်ဘာသာဖတ်ဖို့ 
မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စွန့် လွှတ်
September 26, 2011 at 2:17 PM Reply
လာပြန်ပြီဟ .. နောက်တတုတ်။
သင်းက တုတ်ရုံမဟုတ် ကြီးလဲကြီးသေး။ နေတော့ တာဝတိံသာ။ ဟံမယ်မင်း..ဟုသာ သွားလေသူ ဆရာကြီး တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် ညည်းသလို ညည်းလိုက်ချင်တော့။
အမယ် .. သူတို့ ဂေါဏေန တွေကလည်း မဖြစ်ညစ်ကျယ် ညီညွတ်ရေးတွေ အထွေးသားကလား ကွယ်ရို့။ သူတို့ ဇာတိပြ၍ ရွှေဉာဏ်တော်စူးရောက်စွာ ဥပစာ ပြုခဲ့သော ဖဲဥပမာနှင့် ပြောရသော် နှပ်သူနှပ်၊ ချိုးသူချိုး၊ ဒလံလုပ်၍ ထိုးသူထိုး တဆင့်တက်ပြီး ဒါနှင့်မှ မလုံလောက်သေးထင်လျှင် ဓါးထောက်လုရန် ဝန်မလေးသူများဟု သုံးသပ်လျှင် (မကြိုက်မှာ သေချာသော်လည်း) မှားအံ့မထင်။
September 26, 2011 at 2:18 PM Reply
အနှီ အေဘီစီက ဝ၊ တုတ်၊ ပေါ တို့၊ ဝနေက စနေတို့ ၏ အာဘော်ကို (ဘုရားစူးရစေ့) လေးစားစွာ လေ့လာခဲ့ပြီး တွေ့ရှိသမျှမှာ --
၁) လူထုခေါင်းဆောင် ပီသလိုလျှင် (အမျိုးသမီးမှန်က) နံ့သာလိမ်းကျံ ပန်းမပန်ရ။ လူထူထူမှာ စကားမပြောရ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှပြုံးမပြရ၊ ပြီးတော့ (ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်)
၄) နိပါတ်တော်လာ လူဆိုးသူခိုးတို့၏ အမွေးမြူခံ (စင်စစ်သူတို့ကို မြွေပွေးသဘွယ် ခါးပိုက်ပိုက်ထား ကြကုန်သော တိုင်းပြည်နိုင်ငံများသည် လူဆိုးသူခိုး မဟုတ်ရုံမက သူတို့ဖျက်ဆီးရန် မဆုတ်မနစ် ကြံနေကြသော သူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာ သူတို့ဇာတိမြေမှ ပြည်သူတွေအပေါ် သူတို့ထက်ပို၍ပင် မေတ္တာထားကြသည်ကို စိုးစဉ်းမျှ သံသယဖြစ်ဘွယ် မရှိ၊ သူတို့၏အဇ္ဈတ္တ ကိုက သားရေပေါ်အိပ် သားရေနား စားခြင်း၌ ဝါသနာထုံခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ ဤကား စကားချပ်။)
September 26, 2011 at 2:19 PM Reply
ကျေးမိုက်ကဲ့သို့ "ဟေ့..ဝိုင်းကြပါ တော့လား၊ ချကြပါတော့လား၊ အာရပ်နွေဦးမှာ မြူးကြပါတော့လား (စင်စစ် အာရပ်လို အရပ်မျိုးမှာ နွေဦးရှိနိုင်မရှိနိုင် ကျွနုပ်မသိ သူတို့လည်း သိပုံမပေါ်) လစ်ဗျားကလှိုင်းကြီး စီးကြပါတော့လား" ဟု ခပ်မိုက်မိုက် ခပ်ဖိုက်ဖိုက် (တချိန်က ငါးသိုင်းချောင်းမြို့သား ကဗျာနီဆရာသမား ရေးဖွဲ့ဘူးသလို) ပြည့်တံဆာခန်းမှာ အိပ်မောကျနေဆဲ ဆိုက်ကားဘီးပေါက်သံကြောင့် လန့်နိုးသည့် လေသံမျိုးဖြင့် အော်နေကြသည်မှာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ကွက်တိဖြစ်နေ လေ၏။
လုပ်စားခံရဖန်များ လွန်း၍ နောကျေနေသော၊ သင်းရို့ အာဏာရှင်တွေ နှင့် အာဏာတည်ဆောက် ချင်ခြင်းကြီးသူတွေ အကြားမှာ ချိနဲ့နေပြီလည်းဖြစ်သော ပြည်သူတွေ တုတ်တုတ် (သူတို့နာမည်မဟုတ်) မျှ မလှုပ်သော အခါတွင်မူ "ဒီအဖွားကြီးကြောင့်၊ ဒင်းရှုပ်နေလို့" ဟု ယိုးစွပ်ကြပြန်သည်။ တဦးကဆိုလျှင် "လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်လုံး ဒင်းဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး" ဟု အရူးချေးပန်း သံယောင်ဟစ်လိုက်သေး၏။
၂၃ နှစ်လုံးလုံး အဖွားကြီး၏ ခြေ၊လက်၊ပါးစပ် တွေတုပ်နှောင် ပိတ်ဆို့ ခံနေခဲ့ရစဉ် သူတို့ရဲ့တန်ဘိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ (ဘီယာဆိုင်၊ ဖဲဝိုင်း၊ ကာရာအိုကေ နဲ့စိုပြေချိန် အပါအဝင်) ဘယ်လောက် ပြည်သူအတွက် လုပ်ခဲ့ပါသလဲ ဟု သူတို့ကိုယ်သူတို့တော့ မေးဖြစ်ကြပုံ မပေါ်။
"ကဲ .. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ .. အရပ်ကတို့ရေ" လို့သာ အော်လိုက်ချင်တော့။ မဖြစ်ညစ်ကျယ်ဟု စိတ်ရှိသလောက် ပြောခဲ့သော်လည်း သည်အရေးက လွယ်သည်လို့မထင်။ ဘာလေးခုန်လို့ဖုံမထ ဟုလည်း သူငယ်နှပ်စားသဘော မပြောချင်။ နိုင်ငံ့အရေး၊ အတ္တအိုးကွဲတွေနှင့် ပိဋကတ်အိုးကွဲတွေကြားမှ အသက်ငင်နေသော ပြည်သူတွေ၏ အရေး။ တာဝတိံသာရောက် ဘုန်းကြီးတစ္ဆေများ၏
ပစ္စည်းမဲ့သောမမဲ့သော ခေတ်အဆက်ဆက် အရပ်တကာ လူတကာ တို့၏ အကော်ရော် ခံရသူ စာရေးဆရာကြီး ဂေါ်ကီ ရေးသားပြီး စာရေးဆရာကြီး မြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ဆို ခဲ့ဘူးသည့် “ဖိုးမာဂေါ်ဒီယက်” အမည်ရှိ ဝတ္တုစာအုပ် မှ ကြံကြံဖန်ဖန် မှတ်မိနေသေးသော စကားတခွန်း ကိုးကားခွင့်ပြုပါ။ "ဒီလူ (တွေ) ဟာ ခြင် လိုဘဲ။ တဝီဝီနဲ့ နားညီးအောင်လုပ်တယ်၊ လစ်ရင်လစ်သလို ဝင်လဲကိုက် တတ် (ကြ) သေးတယ်" ဟူသတတ်။
ဘာမှမဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တောင်မှ ကျီးလန့်စာ စားနေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေ အလကားနေရင်း အိပ်ရေးမပျက်ရအောင် သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ ခြင်ရန်ကာကွယ်ရေး အသိလေးတွေ ပေးထားကြရင် ကောင်းမလား တွေးမိကြောင်းပါခင်ဗျား။
"ဒီအဖွားကြီးကြောင့်၊ ဒင်း ရှုပ်နေလို့" လို့ယိုးစွပ်နေကြတာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ပါ says:
September 28, 2011 at 1:51 PM Reply
"ဒီအဖွားကြီးကြောင့်၊ ဒင်း ရှုပ်နေလို့" လို့ယိုးစွပ်နေကြတာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ပါ
သင်းက တုတ်ရုံမဟုတ် ကြီးလဲကြီးသေး။ နေတော့ တာဝတိံသာ။ ဟံမယ်မင်း.. ဟုသာ သွားလေသူ ဆရာကြီး တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် ညည်းသလို ညည်းလိုက်ချင်တော့။
အမယ် ... သူတို့ ဂေါဏေန ဂေါဏော တွေကလည်း မဖြစ်ညစ်ကျယ် ညီညွတ်ရေးတွေ အထွေးသားကလား ကွယ်ရို့။
သူတို့ ဇာတိပြ၍ ရွှေဉာဏ်တော် စူးရောက်စွာ ဥပစာ ပြုခဲ့သော ဖဲဥပမာနှင့် ပြောရသော် နှပ်သူနှပ်၊ ချိုးသူချိုး၊ ဒလံလုပ်၍ ထိုးသူထိုး တဆင့်တက်ပြီး ဒါနှင့်မှ မလုံလောက်သေးထင်လျှင် ဓါးထောက်လုရန် ဝန်မလေးသူများဟု သုံးသပ်လျှင် (မကြိုက်မှာ သေချာသော်လည်း) မှားအံ့မထင်။
အနှီ အေဘီစီက ဝ၊ တုတ် ၊ပေါ တို့၊
ဝနေက စနေတို့ ၏
အာဘော်ကို (ဘုရားစူးရစေ့) လေးစားစွာ လေ့လာခဲ့ပြီး တွေ့ရှိသမျှမှာ..
၁) လူထုခေါင်းဆောင် ပီသလိုလျှင် (အမျိုးသမီးမှန်က) နံ့သာလိမ်းကျံ ပန်းမပန်ရ။ လူထူထူမှာ စကားမပြောရ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှပြုံးမပြရ၊ ပြီးတော့ (ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်) ဘောလုံးပွဲမကြည့်ရ၊ ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကား ယောင်လို့တောင် မပြောရ။ ရန်သူနှင့် တစားပွဲတည်းမထိုင်ရ၊ ရန်သူနှင့် မစေ့စပ်ရ၊ ပြီးတော့..ပြီးတော့
၂) လူထုခေါင်းဆောင် (အမျိုးသား) မှန်က (အစ ဘယ်ညာ အချမှားမည်စိုး၍) ခေါင်းပေါင်း မပေါင်းရ၊ ရန်ငါမျဉ်း မကျူးရ၊ ပန်းနံ့သာ ကိစ္စမှအပ အမှတ်စဉ် (၁) က အတိုင်း။ (လူထုခေါင်းဆောင် အလောင်းအလျာများ ဖြစ်ကြကုန်သော ကိုမင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇေယျာတို့၊ မမီးမီး၊ မနီလာသိမ်းတို့၊ မစုစုနွေး တို့နှင့်တကွ အကျဉ်းစံ အကျဉ်းလွတ် ရွက်ပုံးသီးများ အပါအဝင် အားလုံး သတိပြု ကြပါစေကုန်)
September 28, 2011 at 1:59 PM Reply
၃) လွတ်မြောက်ရေး ဆိုသည် လက်ဝေခံ၍ မရ၊ တိုက်ယူမှရသည်။ လက်နက်ချင်း မမျှလည်း ကိစ္စမရှိ၊ မဝင်းမော်ဦးလို သမီးရတနာလေးတွေ နောက်ထပ် ရာဂဏန်းမျှ ရှေ့က ထားလိုက်ရုံနှင့် ပွဲပြီးပြီ။ ဘုရား..ဘုရား။ (သူတို့ဝေါဟာရ "အချောင်သမား ပညာတတ်ညဉ်" နှင့်) သူခိုးလူဟစ်သလို ပြော (လှုံ့ဆော်) ရက်သည်က “ဒီအဖွားကြီး မဝင်းမော်ဦး ကိုမှ အားမနာ သစ္စာမစောင့်” တဲ့။ မဝင်းမော်ဦးတို့ လို အနာဂါတ် တောက်ပြောင်သင့်သည့် နိုင်ငံ့သည်းပွတ် လေးများ (နူရာဝဲစွဲ လဲရာ သူခိုးထောင်း ဆိုသလို) ဘာအကြောင်းပြနှင့်မှ ထပ်မံ (ထပ်မံ) အစတေး မခံစေလို၍ သူ့ကိုယ်သူ (တကယ့်သေနပ်နှင့် လေသေနပ်တွေ) အကြားမှာ စတေးခံကာ ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ် လှုပ်ရှားနေသူ (မရိုသေ့စကား) စူပါစတား၊ ဇာတ်ပျက်၊ အဖွားကြီး အခေါ်ခံ (နေလိုက သင်းတို့ထက် နေသာသော) အမေအရွယ်၊ အဖွားအရွယ် တခေတ်တယောက် မိန်းမသား တဦး၏ စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်နေကြသည့် သူတို့ အတ္တ မှာ စော်ကားသည် ဟူသော စကားကပင် (သူတို့စကားနှင့်ပင် သူတို့ကိုပြန်ပြောရလျှင်) အလေးနီပြုလောက် ပါပေသည်။
၄) နိပါတ်တော်လာ လူဆိုးသူခိုးတို့၏ အမွေးမြူခံ (စင်စစ် သူတို့ကို မြွေပွေးသဘွယ် ခါးပိုက်ပိုက်ထား ကြကုန်သော တိုင်းပြည်နိုင်ငံများသည် လူဆိုးသူခိုး မဟုတ်ရုံမက သူတို့ ဖျက်ဆီးရန် မဆုတ်မနစ် ကြံနေကြသော သူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာ သူတို့ဇာတိမြေမှ ပြည်သူတွေအပေါ် သူတို့ထက်ပို၍ပင် မေတ္တာထားကြသည်ကို စိုးစဉ်းမျှ သံသယဖြစ်ဘွယ် မရှိ၊ သူတို့၏ အဇ္ဈတ္တ ကိုက သားရေပေါ် အိပ် သားရေနား စားခြင်း၌ ဝါသနာထုံခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ ဤကား စကားချပ်။)
September 28, 2011 at 2:01 PM Reply
" ဟေ့.. ဝိုင်းကြပါတော့လား၊ ချကြပါတော့လား၊
အာရပ်နွေဦးမှာ မြူးကြပါတော့လား (စင်စစ် အာရပ်လို အရပ်မျိုးမှာ နွေဦး ရှိနိုင်မရှိနိုင် ကျွနုပ်မသိ သူတို့လည်း သိပုံမပေါ်)
လစ်ဗျားက လှိုင်းကြီး စီးကြပါတော့လား"
ဟု ခပ်မိုက်မိုက် ခပ်ဖိုက်ဖိုက် (တချိန်က ငါးသိုင်းချောင်းမြို့သား ကဗျာနီဆရာသမား ရေးဖွဲ့ဘူးသလို) ပြည့်တံဆာခန်းမှာ အိပ်မောကျနေဆဲ ဆိုက်ကားဘီးပေါက်သံကြောင့် လန့်နိုးသည့် လေသံမျိုးဖြင့် အော်နေကြသည်မှာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ကွက်တိ ဖြစ်နေလေ၏။
လုပ်စားခံရဖန် များလွန်း၍ နောကျေနေသော၊ သင်းရို့ အာဏာရှင်တွေ နှင့် အာဏာတည်ဆောက် ချင်ခြင်းကြီးသူတွေ အကြားမှာ ချိနဲ့နေပြီလည်းဖြစ်သော ပြည်သူတွေ တုတ်တုတ် (သူတို့ နာမည်မဟုတ်) မျှ မလှုပ်သော အခါတွင်မူ "ဒီအဖွားကြီးကြောင့်၊ ဒင်း ရှုပ်နေလို့" ဟု ယိုးစွပ်ကြပြန်သည်။
တဦးကဆိုလျှင် "လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်လုံး ဒင်း ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး" ဟု အရူးချေးပန်း သံယောင်ဟစ်လိုက်သေး၏။
၂၃ နှစ်လုံးလုံး အဖွားကြီး၏ ခြေ၊ လက်၊ ပါးစပ် တွေ တုပ်နှောင် ပိတ်ဆို့ ခံနေခဲ့ရစဉ် သူတို့ရဲ့တန်ဘိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ (ဘီယာဆိုင်၊ ဖဲဝိုင်း၊ ကာရာအိုကေ နဲ့စိုပြေချိန် အပါအဝင်) ဘယ်လောက် ပြည်သူအတွက် လုပ်ခဲ့ပါသလဲ ဟု သူတို့ကိုယ် သူတို့တော့ မေးဖြစ်ကြပုံ မပေါ်။
September 28, 2011 at 2:07 PM Reply
ကဲ ... ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ... အရပ်ကတို့ရေ လို့သာ အော်လိုက်ချင်တော့။
မဖြစ်ညစ်ကျယ် ဟု စိတ်ရှိသလောက် ပြောခဲ့သော်လည်း သည်အရေးက လွယ်သည်လို့မထင်။ ဘာလေး ခုန်လို့ ဖုံမထ ဟုလည်း သူငယ်နှပ်စား သဘော မပြောချင်။ နိုင်ငံ့အရေး၊ အတ္တအိုးကွဲတွေနှင့် ပိဋကတ်အိုးကွဲတွေကြားမှ အသက်ငင်နေသော ပြည်သူတွေ၏ အရေး။ တာဝတိံသာရောက် ဘုန်းကြီးတစ္ဆေများ၏ ယပ်လှဲ ပရိတ်တရားအရေး။
ပစ္စည်းမဲ့သော၊ မမဲ့သော ခေတ်အဆက်ဆက်၊ အရပ်တကာ၊ လူတကာ တို့၏ အကော်ရော် ခံရသူ စာရေးဆရာကြီး ဂေါ်ကီ ရေးသားပြီး စာရေးဆရာကြီး မြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ဆို ခဲ့ဘူးသည့် “ဖိုးမာဂေါ်ဒီယက်” အမည်ရှိ ဝတ္တုစာအုပ် မှ ကြံကြံဖန်ဖန် မှတ်မိနေသေးသော စကားတခွန်း ကိုးကားခွင့်ပြုပါ။
“ ဒီလူ (တွေ) ဟာ ခြင် လိုဘဲ။ တဝီဝီနဲ့ နားညီးအောင် လုပ်တယ်၊ လစ်ရင်လစ်သလို ဝင်လဲ ကိုက် တတ် (ကြ) သေးတယ်” ဟူသတတ်။
October 7, 2011 at 8:23 PM Reply
ဒေါ်စုကို မကြိုက်ရင်လဲ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.. -
" စစ်အစိုးရနဲ. သူ.အလိုတော်ရိ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ " ဆိုတဲ့ စစ်ခွေး သဒေါင်းစါး သမိုင်းတရားခံများက မြန်မာပြည်သူတွေကို နွားလို သဘောထားပြီး --
မုဒိမ်းကျင့်၊ ပေါ်တာဆွဲ၊ ဘုန်းကြီးသတ်၊
ခလေးစစ်သားပြန်ပေးဆွဲ၊ ထောင်ထဲထည့်၊ လာဘ်တောင်း၊
သယံဇာ မြစ်ချောင်းမကျန် ပြည်ပကို လက်ညှိုးထိုး ရောင်းစါး၊ ကိုယ့်အိပ်ထဲထည့်၊
တိုင်းပြည်ကို နှစ်ရှည် စစ်ကျွန်ပြု ဓါးပြတိုက်နေတာ လေ။
ဒေါ်စုက " စစ်အစိုးရနဲ. သူ.အလိုတော်ရိ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ " လို တော့ မဟုတ်ဘူး လေ။
ဒေါ်စုက " ပြည်သူ.အော့ကြောလန် ချေးထက် စက်ဆုတ်ဖွယ် စစ်ခွေး သဒေါင်းစါး သမိုင်းတရားခံများ " လို တော့ မဟုတ်ဘူး လေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၁) says:
October 7, 2011 at 11:33 PM Reply
မေး - အန်တီ့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးခရီး ကြမ်းကိုလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ နေ့ရက် တွေ လည်း အများကြီး။ တစ်ကိုယ်တည်းလည်း နေခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်၊ ဘယ်လို သမာဓိမျိုး ခံယူပြီး တော့ ဒီအခက်အခဲတွေ ကို ဖြတ်ကျော်ရင်ဆိုင်ပါသလဲ။
ဖြေ - တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကိုယ်တွေ့တဲ့ အခက်အခဲတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကျော်လွှားပါတယ်။ မဖြစ်သေးတဲ့ဟာတွေကို တော့ လုံးဝမစဉ်းစားဘူးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတော့ ဒါတော့ စဉ်းစားတာပေါ့။ ဖြစ်နိုင် ခြေရှိတာတွေ၊ အဲဒါထက်ပိုပြီးတော့ လက်တွေ့ကျကျ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို တစ်ခုစီတစ်ခုစီ ကျော်လွှား သွားတာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်မထင်တယ်။
မေး - ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာရေးတယ်။ စာအုပ်တွေလည်း အများကြီး ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလား။
ဖြေ - အဲဒါ တစ်ခုလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ အချို့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရေးချင်တဲ့စိတ် ရှိပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိအနေနဲ့တော့ သိပ်ပြီးတော့ ရေးချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကျွန်မ ထင်တယ်လေ။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရေး တာဟာ စုံစုံလင်လင် ရေးဖို့ဆိုတာလည်း ခက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တော့လည်း အဲဒါအပြင်မှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်ပုံက ဘယ်လိုပဲပြောပြော တစ်ဖက်သတ်တော့ မြင်မှာပဲ။ (ရယ်လျက်)
မေး - နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ရေးတာပဲ။ စာရေးကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ တချို့မရေးတတ်တဲ့သူတောင် ရေးကြသေးတယ်။ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ် လိုရော မြန်မာလို ရောတတ်တာပဲ။
ဖြေ - အဲဒါကတော့ ဟုတ်တာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့လည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ကျွန်မတို့လိုနိုင်ငံရေး လုပ်နေတဲ့သူ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်ဘဝဆိုတာ မရှိသလောက်ပဲ။ အဲဒီတော့ ဘာပဲပြောပြော အဲဒီလို သီးသန့်ဘဝမျိုးတော့ တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းသိမ်းထားချင်စိတ်လည်း ပါတာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် လည်း ဒီလိုကိုယ်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေ ဘာတွေ မရေးချင်တာ။ အမေဒေါ်အမာလည်း မေးဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ကျွန်မ မန္တလေးမှာတွေ့ တုန်းက အဲဒီလိုပဲ မေးဖူးတယ်။ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိရေးဖို့ မစဉ်းစားဘူးလားတဲ့။ ကျွန်မဒီလိုပဲဖြေခဲ့တယ်။ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် ဘဝအပိုင်းအစ တစ်ခုတော့ ရှိသင့်တယ်။ အဲဒါကြောင့် မရေးချင်ဘူးလို့။ အမေကနားလည်ပါတယ်။
မေး - သူများတွေ ရေးရင်ကော။
ဖြေ - သူများတွေက ရေးတာတော့ ကျွန်မခွင့်ပြုတာ၊ မပြုတာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရေးပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ မရေးနဲ့လို့လည်း မပြောဘူး။ ရေးလို့လည်း မပြောဘူး။
မေး - သူများတွေ အန်တီနဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး ရေးရင်ရော။
ဖြေ - အဲဒါတော့ ကျွန်မ မလုပ်ဘူး။ ကျွန်မ အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးဖို့ အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ တောင်းရင်တော့ ကျွန်မ မပေးဘူး။ ဒါတော့ ကျွန်မလက်မခံဘူး။ ရေးသမျှကို ကိုယ်ကပဲသဘော တူသလိုလိုနဲ့။ အဲဒီလိုဟာမျိုး ဖြစ်သွားမှာစိုးတယ်။ အဲဒါမျိုးကျတော့ ကျွန်မတာဝန်ယူရမှာ။ အဲဒီတော့ တကယ်တော့လည်း စာရေးဆရာက သူရေးချင်တာရေးမှာပဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့ နောက်ပြီးတော့လည်း ဒီလိုရေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ သူတွေများတဲ့ အခါကျတော့ တစ်ယောက်တော့ပေးပြီး တစ်ယောက်တော့ မပေးဘူးဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုး ကျွန်မ မခွဲခြားချင်ဘူး။
မေး - နိုင်ငံခြား စာရေးဆရာတွေ ဆိုရင်ရော။
ဖြေ - လာပြီးတော့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်မကပြောတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရးချင်ရေး။ ဒါကတော့ ကျွန်မလည်းမတားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီဟာရေးဖို့အတွက် အင်တာဗျူး ဆိုတာတော့ ကျွန်မ မလုပ်ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၂) says:
October 7, 2011 at 11:35 PM Reply
မေး - The Lady ဇာတ်ကားကို ကော ကြည့်ပြီးသွားပြီလား။
ဖြေ - မကြည့်ရသေးဘူး။ ကြည့်ဖို့ လည်း ရည်ရွယ်ချက် သိပ်မရှိပါဘူး။
မေး - အဲဒီဇာတ်ကားကို ဝေဖန်နေတာတွေ ကိုရော အန်တီကြားလား မသိဘူး။
ဖြေ - အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာပေါ့ နော်။ ကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ မကြိုက်တဲ့လူလည်း ရှိတယ်။ ဒါဟာ ဇာတ်ကားတိုင်းက ဒီလိုပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဒါကျွန်မလည်း မသိဘူး လေ။ ရိုက်နေတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်မဘာမှမပတ်သက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မ အနေနဲ့ မီရှဲယိုနဲ့တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူက အင်မတန် ခင်မင်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာဒါပဲ။ တွေ့တဲ့အချိန်တုန်းက ဇာတ်ကားက ရိုက်လို့ပြီးနေပြီ။
မေး - အန်တီ့အနေနဲ့ ဘဝမှာ စံနမူနာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူက ဗိုလ်ချုပ်ပဲလား။ တခြား ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိသေးလား။
ဖြေ - အဖေကတော့ ထူးခြားတာပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့အဖေလည်းဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ ဖေဖေ့ကို ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လက်ခံတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဖေဖေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် ငယ်ငယ် ကတည်းက သိနေတယ်။ အဲဒီတော့ စံနမူနာ အဖြစ်နဲ့ပြောရအောင် သိပ်နီးကပ်နေတဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ်နဲ့တောင် ခွဲခြားလို့ မရသလို ဖြစ်နေတယ်။ စံနမူနာအဖြစ်နဲ့ ထားတာတစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင် ကျွန်မ ဂန္ဒီကြီးကိုလည်း လေးစားတာပဲ။ ဂျဝါဟလာနေရူး လည်း လေးစားပါ တယ်။ ပုံစံချင်းကမတူဘူး။ ပုံစံချင်း က မတူပေမယ့်လည်း နှစ်ဦးစလုံး က တစ်မျိုးစီလေးစားစရာ ကောင်း တာပဲ။ အခုခေတ်မှာဆိုရင် နယ်လ် ဆင်မစ်ဒဲလားနဲ့ ဒက်စမွန်တူးတူးနဲ့ မတူသလိုပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် တူတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ဦးစလုံးက လေးစားစရာပဲ။ နောက်နိုင်ငံရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေ ထဲမှာတော့ ကျွန်မအလေးစားဆုံးက မာရီကျူနီပဲ။ နိုဘယ်ဆုရှင်မို့လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ဥာဏ်ရောဇွဲရော၊ အပင်ပန်းခံပြီး သူယုံကြည်တဲ့အလုပ်ကို သူလုပ်တာရော။ အမျိုးမျိုးပေါ့။
မေး - အန်တီ့အနေနဲ့ နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ခံရကြောင်း သိလိုက်ရတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။
ဖြေ - အဲဒါကတော့ နိုဘယ်ဆုက မချီးမြှင့်ခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက် တုန်းက ဒါရနိုင်တယ်ဆိုတာ BBC တို့၊ VOA တို့ကနေ ကြားနေရတာ ပေါ့။ လုံးဝအံ့အားသင့် တယ်လုိ့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရနိုင်ခြေများတယ် ဆိုတာတော့ နည်းနည်းကြိုတင်ပြီးတော့ ကြားနေရတာကိုး။
မေး - အန်တီ ဒီလောက်အလုပ် များနေတဲ့ကြားထဲက စာပေတွေကို ဘယ်အချိန်မှာဖတ်ပြီး ဘယ်လိုလေ့လာပါသလဲ။ တချို့က အလုပ်များတယ် များတယ် စာဖတ်ချိန်တောင် မရှိဘူးလို့ ပြော ကြတယ်။
ဖြေ - အဲဒါကတော့လေ မဖတ်ချင်လို့ပဲ။ တကယ်ဖတ်ချင် လို့ရှိရင် နည်းနည်းလေး မဖတ်လိုက်ရရင် တစ်ခုခု လိုနေသလိုပေါ့နော်။ စာဖတ်တယ် ဆိုတာက ထမင်းစား ရေသောက် သလိုပေါ့။ အချိန်ရှိသရွေ့ဒီလိုပဲ။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် စားပွဲမှာ အဲဒီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတွေဘာတွေ လုပ်နေရင်းနဲ့ ဘေးမှာတော့ စာအုပ်ကလေး ၂ အုပ် ၃ အုပ်ထားတာပေါ့။ အချိန်ရှိခိုက် စာဆွဲဖတ်လိုက်တာပေါ့။ တစ်ခါတလေကျ လို့ရှိရင်လည်း တစ်နေ့လုံး သတ်သတ် မှတ်မှတ်စာဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဖတ်တာလည်း ရှိတာပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၃) says:
October 7, 2011 at 11:37 PM Reply
မေး - အန်တီစကားပြောတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ ပါနိုင်ရဲ့သားနဲ့ ထည့်မသုံးဘူး။ တချို့တွေတော်တော်များများက အင်္ဂလိပ် စကားလုံးတွေ ညှပ်ညှပ်ပြီး ပြောကြတယ်။ အဲဒါ အန်တီ က တမင်တကာ သတိထားပြီးတော့လား။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာစကားကို မြန်မာလိုပဲ သေချာ ပြောဖြစ်တာလား။
ဖြေ - အဲဒါတော့ အလေ့အကျင့်ပဲ။ အဲဒါ မေမေ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်။ မေမေက ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ထားတယ်။ ဗမာစကားပြောရင် ဗမာစကားပြော၊ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောရင် အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြော။ ရောပြီးတော မပြောနဲ့။ တစ်ခါတလေ ကျွန်မလည်း ဗမာစကားက သိပ်ပြီးတော့ ရှာရခက်တယ်။ တိတိကျကျ မရှိရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စကား ညှပ် ပြောရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်နိုင်လို့ရှိရင် တတ်နိုင်သမျှ ဗမာလိုပြန်ပြီး ပြောင်ရင်တော့ ဗမာလိုပဲပြောတယ်။
မေး - အန်တီက အမှားတစ်ခုလုပ် ပြီးရင် ကြာကြာမထားတတ်ဘူး။ ချက်ချင်းပြောလိုက်ရမှလုိ့ ပြောဖူးတယ်နော်။
ဖြေ - ကျွန်မက တောင်းပန်စရာရှိရင် ချက်ချင်းတောင်းပန်တယ်။ ဒါကို ဆွဲပြီးမနေဘူး။ ဆွဲပြီးနေလို့လည်း အဲဒါက ပျောက်သွားမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်တာဖြစ် ခဲ့ပြီးပြီပဲ။ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ ဖြစ်ပြီးတဲ့ ကိစ္စကို မဖြစ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ ဖန်တီးလို့ရတာမှ မဟုတ်တာ။ ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စက ဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ အဲဒီ ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စအတွက် တောင်းပန် ဖို့လိုတယ်ဆိုရင် မြန်မြန် တောင်းပန်လိုက်တယ်။
မေး - ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ် ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုကျင့်ကြံ ပါသလဲ။
ဖြေ - တရားမှတ်တာတော့ မှန်မှန် မှတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်နာရီပေါ့။ ဒါကတော့ ပုံမှန်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေ့ါ။ အမှန်ပြောရရင် အဲဒါထက်ပိုပြီးတော့ လုပ်ဖို့အချိန်သိပ်မရှိဘူး။
မေး -ကိုထိန်လင်းကလာတယ်။ အလက်ဇန်းဒါးက ဘယ်တော့ လာမလဲ။ လူတွေကသိချင်ကြတယ်။
ဖြေ - အဲဒါကတော့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အစီအစဉ်ကတော့ မလုပ်ရသေးဘူး။ စကားပြောတာကတော့ တစ်ပတ်တစ်ခါ တယ်လီဖုန်းနဲ့ မှန်မှန်ပြောတယ်။ သူ့အတွက် အဆင် ပြေတဲ့အချိန်မှပဲ လာဖို့အကောင်းဆုံးပဲလို့ အန်တီကလည်း သဘောတူထားပါတယ်။
မေး - တချို့တွေက သိချင်လို့ လာ မေးကြတယ်။ ကိုထိန်လင်း ဘာလုပ်သလဲဆိုတာ။
ဖြေ - သူက လက်သမားအလုပ်ကို သင်တန်းတက်ပြီးတော့ သင်ထားတယ်။ သူက အဲဒီအလုပ်ကိုပဲ ဝါသနာပါပြီး အဲဒီအလုပ်ပဲ လုပ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝိုင်းဝန်းကြပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အချိန်ပေးကြပါ says:
October 16, 2011 at 9:02 PM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝိုင်းဝန်းကြပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အချိန်ပေးကြပါ
(အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
ဒီတကြိမ်တော့ လမ်းပျောက်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ရောင်ခြည် သန်းနေပါပြီ။ အောင်မြင်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်းကို အချိန်က ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီလမ်းက အသစ် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝိုင်းဝန်းကြပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အချိန်ပေးကြပါလို့ ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
မငယ်နိုင်ရေ အားပေးပါတယ်ဗျာကျွန်တော် comment ပေးလေ့သိပ်မရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ
ကျွန်တော်လဲ အန်တီစုကို လေးစားထောက်ခံသူတဦးပါ
အရင်ကလဲဒီအတိုင်းဘဲ ခုလဲဒီတိုင်းဘဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဆိုတော့ အန်တီစု ကိုအပြည့်အ၀ယုံကြည်လို့ပါ။
ဦးအောင်မင်းက "ဒေါ်စုကြည်" လို့ သုံးနှုန်းလို့ "ခွေးအိုလော" ၊ "လူအိုလော" ပြောခြင်း မဟုတ်ပါ says:
September 14, 2013 at 12:57 PM Reply
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်
"အောင်ဆန်းစုကြည်" ဆိုတာ သူမ၏ အဖေ ဦးအောင်ဆန်းနှင့် သူမ၏ အမေ ဒေါ်ခင်ကြည် နှစ်ဦးစလုံး သဘောတူ ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ပါ ။ ထွင်ပြီး အဖေနာမည် ကောက်တပ်ထားတာ မဟုတ်ပါ ။
နာမည်လေးလုံးစလုံး ခေါ်ရမှာ မောတယ် ဆိုရင်လည်း အဖျားဆွတ်ပြီး "ဒေါ်အောင်ဆန်း" လို့ ခေါ်ပေါ့ဗျာ ။
"ခွေး" ဆိုတာတော့ အိုမှ သတင်းစာကောက်၊ ဘောလုံးကောက်၊ လက်ပေး သင်လို့ မရတော့ပေမယ့် .... "လူ" ဆိုတာတော့ ဘယ်အချိန်မဆို အမူအကျင့်ကောင်းတွေကို လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ် ။
သဘောကို ပြောပြတာပါ ၊ ဦးအောင်မင်းက "ဒေါ်စုကြည်" လို့ သုံးနှုန်းလို့ "ခွေးအိုလော" ၊ "လူအိုလော" ပြောခြင်း မဟုတ်ပါ ။
လက်ရှိ ချိတ်ထမိန်ဝတ်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အားလုံး "ကိုယ်ကျင့်တရား" မကောင်းကြဘူး။ "ကိုယ်ကျင့်တရား" မကောင်းသူတွေကို ထောက်ခံစရာ အကြောင်း မရှိဘူး။ says:
August 6, 2014 at 5:03 AM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာလို့ ထောက်ခံတာလဲ။
လက်ရှိ သမ္မတ သိန်းစိန် အပါအဝင် စစ်တပ်ကလာသူတွေကို ဘာလို့ လက်မခံတာလဲ။
ဒီမေးခွန်းက ၂ ခု ဖြစ်ပေမယ့် အဖြေက တစ်ခုတည်း။
အဲဒီ အဖြေကတော့ ... "ကိုယ်ကျင့်တရား" ... ဆိုတာပဲ။
လက်ရှိ တိုင်းပြည်မှာ အာဏာယူထားတဲ့ လူတွေအားလုံး နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြားသော အရည်အချင်းတွေ ... ကွာခြားချက်တွေကို ပြောရင် ... အငြင်းပွားနေဦးမယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ ငြင်းမရနိုင်တဲ့ အချက်ကတော့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်သလောက် .... လက်ရှိ ချိတ်ထမိန်ဝတ်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အားလုံး "ကိုယ်ကျင့်တရား" မကောင်းကြဘူး။
နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ... "ကိုယ်ကျင့်တရား" မကောင်းသူတွေကို ဘာကောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘူး။
ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းသူတွေထဲကမှ ဒုတိယ အချက် ... အရည်အချင်းကို ဆက်ကြည့်မယ်။
လက်ရှိကောင်တွေ (ချိတ်ထမိန်ဝတ်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ) ကတော့ ... "ကိုယ့်ကျင့်တရား" မှာတင် ... အကုန် မြောင်းထဲ ရောက်တော့တာပဲ။ အရည်အချင်းကို ဆက်ကြည့်စရာ မလိုတော့ဘူး။
ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး သို့ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးမှ အိတ်မပါဘဲ ပေးတဲ့စာ says:
August 26, 2015 at 12:59 AM Reply
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌကြီး ဦးဌေးဦး သို့
ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးမှ အိတ်မပါဘဲ ပေးတဲ့စာ ။
ဥက္ကဌကြီးတို့၏ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ ၏လုပ်ရပ်နှင့် ပြောဆိုချက်များမှာ မိခင်ပါတီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ကျဆင်းစေသည့်အပြင် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ခိုင်မာစေရေးအတွက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို ဦးစီး ဖော်ဆောင်နေသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရပ်တည်မှုများကိုပါ အထင်အမြင်လွဲစရာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသောကြောင့် အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်တော် ဦးလှဆွေကို လိုအပ်သလို အရေးယူနိုင်စေရန် အကြံပြု တင်ပြလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား။
ဥက္ကဌကြီး အလျင်အမြန် စိစစ်သုံးသပ်နိုင်ရန် ယခုနောက်ဆုံး ဦးလှဆွေ ကိုယ်တိုင် လူသိရှင်ကြား တရားဝင်ပြောထားခဲ့သည့် ဦးလှဆွေ၏နှုတ်ထွက်စကားကို ပြည်သူအများ၏ ဝေဖန် အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲ တင်ပြလိုက်ရပါသည် ။
( ဦးလှဆွေ၏ ပြောဆိုချက် )
မိမိတို့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာ အမတ်နေရာအားလုံး၏ ၂၆% မျှ ရလျှင်ပင် အစိုးရဖွဲ့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း -
ထို့အတွက် လွှတ်တော်တွင်းရှိပြီးဖြစ်သည့် ၂၅% သော တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးက မိမိတို့ပါတီအား တလုံးတခဲတည်း ပူးပေါင်းပို့ဆောင်ကြမည့်အကြောင်း
(၁) "၂၆% ရရုံမျှဖြင့် အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည်" ဆိုခြင်းကြောင့် မိခင်ပါတီအား မလျော်သြဇာသုံးသော၊ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျသော ပါတီအဖြစ် ပြည်သူအများ၏ အထင်အမြင်သေးမှုကို ခံရစေနိုင်ခြင်း ၊
(၂) ဦးလှဆွေသည် အမာခံပါတီဝင်တယောက်ဖြစ်လျက် မိမိပါတီအပေါ် မိမိ ယုံကြည်မှုအားနည်းလွန်းသလောက် အတိုက်အခံပါတီအပေါ် အထင်ကြီးလွန်းခြင်း ၊
(၃) ဦးလှဆွေ ပြောကြားသော မမျှတသည့် ဤဖြစ်ရပ်အရ သန့်ရှင်း၍တရားမျှတမှုကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေသည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပါ နိုင်ငံတကာမှ မကြည်မလင် ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း ။
(၄) တပ်မတော်သည် ပါတီတခုမဟုတ် ၊ သီးခြားလွတ်လပ်သည့် တသီးပုဂ္ဂလိကအမတ်များလည်း မဟုတ်ပေရာ ဦးလှဆွေ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုသကဲ့သို့ တစုတစည်းလုံးကြီး တရားဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ခွင့် မရှိပါသောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီဆိုင်ရာ စည်း ဘောင် နည်း ဥပဒေ များနှင့်ပါ ငြိစွန်းသွားနိုင်ခြင်း ။
(၅) ဦးလှဆွေ၏ ပြောကြားမှုကြောင့် ပါတီနိုင်ငံရေးထက် ကြီးမြတ်သော အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ချီတက်နေသည့် တပ်မတော်၏ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက် ညစ်နွမ်းစေခြင်း ။
....... အစရှိသည့် ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ရာကား -
အဆိုပါ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော် ဦးလှဆွေ ကို ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ကြည့်ခြင်း ၊ ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးခြင်း ၊ ထုချေလွှာတောင်းခြင်း ... စသဖြင့် လိုအပ်သလို အရေးယူသင့်ပါကြောင်း ပါတီကြီး၏ရှေ့ရေးကို ရည်မျှော်၍ စေတနာမေတ္တာအပြည့်ဖြင့် အကြံပြုလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား ။
( ဒါရိုက်တာ မိုက် တီး )
ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးမှ အိတ်မပါဘဲ ပေးတဲ့စာ